ပုလ်နှင့်ပြproblemနာရှိသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ရှုခြင်း - မိမိကိုယ်ကိုလေးစားမှု၏တန်ပြန်မှုအခန်းကဏ္ ((၂၀၁၉၉) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌ Porn On
ပုလ်နှင့်ပြဿနာညစ်ညမ်း Views: Self-လေးစားမှု၏အလယ်အလတ်အခန်းကဏ္ဍ (2019)
Borgogna, မြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနား, McDermott, RC, Berry ဟာ, AT, & ဘရောင်း, BR (2019) ။
အမျိုးသားများနှင့် Masculinities ၏စိတ်ပညာ။ အွန်လိုင်းထုတ်ဝေတိုး။
ပြဿနာညစ်ညမ်းကြည့်ရှုမယ့်ယောက်ျားရဲ့ပြဿနာအဖြစ်တိုးမြှင့်အာရုံကိုလက်ခံရရှိခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော်အနည်းငယ်လေ့လာမှုများယဉ်ကျေးမှုကိုတည်ဆောက်ပုလ်အခန်းကဏ္ဍစံချိန်စံညွှန်းညစ်ညမ်းပြဿနာများဆက်စပ်နှင့်မည်သို့တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှုကဤအသင်းအဖွဲ့များအလယ်အလတ်ဖြစ်နိုင်သည်ကိုမည်သို့လေ့လာခဲ့ကြသည်။ အမျိုးသားများအတွက် (N = 520) အခန်းကဏ္ဍစံချိန်စံညွှန်း masculine မှညီညွတ်မှုပြဿနာညစ်ညမ်းကြည့်ရှုထောင့်နဲ့ဆက်စပ်နှင့်မည်သို့ Self-လေးစားမှုအလယ်အလတ်ကဤအသင်းအဖွဲ့များခဲ့ပုံကိုဆန်းစစ်စစ်တမ်းတစ်ခုတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်အွန်လိုင်းစုဆောင်းခဲ့ကြသည်။ တိုးမြှင့်ပြဿနာညစ်ညမ်းကြည့်နဲ့ဆက်စပ်အဖြစ်စိတ်ခံစားမှုကိုထိန်းချုပ်နှင့်အနိုင်ရတဲ့စံချိန်စံညွှန်းအနုတ်လက္ခဏာပြဿနာညစ်ညမ်းကြည့်ရှုရန်နှင့်ဆက်စပ်သောခဲ့ကြသည်သော်လည်းအကြိမ်ရေ, ဘာသာရေးဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ orientation ကိုကြည့်ရှုညစ်ညမ်းများအတွက်ထိန်းချုပ်ခြင်း, အခြေခံအဆောက်အဦးညီမျှခြင်းမော်ဒယ်, အမျိုးသမီးများနှင့်ပလေးဘွိုင်စံချိန်စံညွှန်းကျော်အာဏာကိုဖော်ပြခဲ့တယ်။ ဤအအသင်းအဖွဲ့များ၏, အမျိုးသမီးစံချိန်စံညွှန်းကျော်အာဏာကိုအားလုံးအတိုင်းအတာကိုဖြတ်ပြီးတသမတ်တည်းအပြုသဘောတိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှုထုတ်လုပ်, စိတ်ခံစားမှုကိုထိန်းချုပ်စံချိန်စံညွှန်းသော်လည်းတသမတ်တည်းအနုတ်လက္ခဏာကိုတိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှုကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ငုပ်လျှိုးနေ variable ကို interaction က, အကအနုတ်ကိုတိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှုပြောင်းပြန် Self-လေးစားမှုအတွက်အနိမ့်ပေမယ့်စိတ်ခံစားမှုကိုထိန်းချုပ်အတွက်မြင့်မားသောယောက်ျားအကြံပြုခြင်းများနှင့် Self-မှီခိုစံချိန်စံညွှန်းပြဿနာညစ်ညမ်းကြည့်ရှုအတွက်တိုးမြှင့်ဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ interaction ကအလားတူ Self-လေးစားမှုအတွက်အနိမ့်သောသူတို့အဘို့တခု exacerbation အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်အတူ, ပလေးဘွိုင်စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ပြဿနာညစ်ညမ်းကြည့်ရှုရန်ညီအကြားအပြုသဘောဆောင်သည့်ဆက်ဆံရေးကိုသက်သေ။ တွေ့ရှိချက်ယောက်ျားရဲ့အညစ်ညမ်းကြည့်ရိုးရာပုလ်သူတို့ရဲ့အသုံးအနှုန်းတွေမှချည်ထားသောစေခြင်းငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, အနိမ့် Self-လေးစားမှုနှင့်အတူယောက်ျားအထူးသဖြင့်အလားအလာဘက်ကလိုက်လျောညီထွေ Over-နှင့်အချို့သောအထီးအခန်းကဏ္ဍစံချိန်စံညွှန်းဖျော်ဖြေတစ်လမ်းအဖြစ်, ညစ်ညမ်းစေရန်ရေးဆွဲနိုင်ပါသည်။ အလေ့အကျင့်များအတွက်သက်ရောက်မှုတွေအထီး clients များညစ်ညမ်းကြည့်ပြဿနာများနှင့်အတူရုန်းကန်နေနှင့်ညစ်ညမ်းစွဲမြဲကုသမှုပုံစံများအတွင်းအရေးပါသောယဉ်ကျေးမှုထည့်သွင်းစဉ်းစားအဖြစ်ပုလ်ပေါင်းစပ်နှင့်အတူပုလ်အတွေးအခေါ်ရှာဖွေစူးစမ်းပါဝင်သည်။
keywords: ပြဿနာညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ View, ပုလ်, ကျားမအခန်းကဏ္ဍ, ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစွဲ, ကိုယ်ပိုင်ချစ်ခင်လေးမြတ်
ပြည်သူ့သိသိသာသာဖော်ပြချက်: ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုရန်နှင့်ဆက်စပ်သောစိုးရိမ်ပူပန်မှုများနှင့်အတူပစ္စုပ္ပန်အတော်များများ clients များ။ ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက် Clinician ပြဿနာညစ်ညမ်းကြည့်အပြုအမူတွေနဲ့အတူရုန်းကန်သူတို့၏ clients များနှင့်အတူယဉ်ကျေးမှုနှင့် Self-လေးစားမှုအချက်များစူးစမ်းလေ့လာသင့်ကြောင်းညွှန်ပြ။
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြည့်ခြင်းသည်အင်တာနက်၏တတ်နိုင်မှု၊ သုံးစွဲနိုင်မှုနှင့်အမည်ဝှက်မှုတို့ကြောင့်ပိုမိုရိုးရှင်းသောအလေ့အကျင့်တစ်ခုဖြစ်သည် (Alexandraki, Stavropoulos, Burleigh, King, & Griffiths, 2018; Cooper, 1998) ။ အပြာစာပေရုပ်ပုံကြည့်ရှုခြင်းအားပိုမိုကြည့်ရှုကြည့်ခြင်းဖြင့်တစ် ဦး ချင်းအနေဖြင့်သူတို့၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောပြproblemsနာများကြုံတွေ့ရနိုင်သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများကိုမိန်းမများထက်ပိုမိုကြည့်ရှုသောအမျိုးသားများအတွက်ဤအချက်သည်အထူးသဖြင့်မှန်ကန်သည် (Albright, 2008; Carroll, Busby, Willoughby, & Brown, 2017; Carroll et al, 2008; Paul, 2009; Price, Patterson, Regnerus, & Walley, 2016) ) နှင့်သူတို့၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြည့်ရှုခြင်း၏ရလဒ်အနေဖြင့်ပြproblemsနာများကိုပိုမိုတွေ့ကြုံခံစားရမည် (Gola, Lewczuk, & Skorko, 2016; Grubbs & Perry, 2018; Grubbs, Perry, Wilt, & Reid, 2018; Twohig, Crosby, & Cox, 2009; Wéry & Billieux, 2017) ။ ထို့ကြောင့်သုတေသီများသည်ခန့်မှန်းသူများအားနားလည်ရန်ပိုမိုစိတ်ဝင်စားလာကြသည် ပြဿနာ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြည့်ရှုခြင်း ပြproblemနာရှိသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ရှုခြင်းအားခြုံငုံ။ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်နားလည်သဘောပေါက်ခြင်းမရှိသော်လည်းသုတေသီများသည်ယေဘုယျအားဖြင့်“ ပြpornနာဆိုင်ရာညစ်ညမ်းစာပေကြည့်ရှုခြင်း” ဟုခေါ်ဆိုသည့်အပြုအမူအချို့ကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့သည် ၎င်းတို့တွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏စွဲလမ်းစေသောလက္ခဏာများ (ရုပ်သိမ်းခြင်းနှင့်သည်းခံခြင်းလက္ခဏာများအပါအ ၀ င်)၊ ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစွဲခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောပုဂ္ဂလိကအမြင်များကိုစိတ်ပျက်စေခြင်း၊ မသင့်လျော်သောအခြေအနေများ (ဥပမာအလုပ်အကိုင်နေရာကဲ့သို့) တွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်း၊ သူတွေကိုစိတ်ခံစားမှုကိုစီမံခန့်ခွဲပါ (Borgogna & McDermott, 2018; Gola et al, 2017, 2016; ။ Grubbs, Perry, Wilt, & Reid, 2018; Grubbs, Sessoms, Wheeler, & Volk, 2010; Grubbs, Wilt, Exline, Pargament, & Kraus, 2018; ။ Kor et al, 2014; Lewczuk, Szmyd, Skorko, & Gola, 2017; Twohig et al, 2009) Kor et al ။ ၏ (၂၀၁၄) အယူအဆကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်ပြproblemနာရှိသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ရှုခြင်းသည်ယေဘူယျအားဖြင့်ချို့ယွင်းချက် ၄ ခုပါ ၀ င်သည်။ (က) လုပ်ငန်းခွင်၌စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုများ (ဥပမာ၊ အလုပ်ခွင်တွင်ပြpartnersနာများနှင့် / သို့မဟုတ်အချစ်ဇာတ်လမ်းမိတ်ဖက်များနှင့်)၊ (ခ) အလွန်အကျွံအသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ်သဘောထားအမြင် အလွန်အကျွံအသုံးပြုခြင်း၊ (ဂ) ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုမည်သည့်အချိန်တွင်အသုံးပြုသည်ကိုထိန်းချုပ်ရန်နှင့် ()) ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံအားအပျက်သဘောဆောင်သောစိတ်ခံစားမှုများမှလွတ်မြောက်စေရန်နည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုခြင်းကိုထိန်းချုပ်ရန်အခက်အခဲရှိသည် (Kor et al ။ , 2014) ။
ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအရသက်ဆိုင်သော variable များကိုညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောပြpornနာရှိသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြည့်ရှုခြင်း၏အရေးကြီးသောအချက်များအဖြစ်ဆက်စပ်ထားသည်။ သို့သော်ယောက်ျားများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏အဓိကစားသုံးသူများဖြစ်သော်လည်းလူမှုရေးအရတည်ဆောက်ထားသောပုလ်အခန်းကဏ္ norm စံများ (Mahalik et al ။ , 2003; Parent & Moradi, 2011) ကဲ့သို့သောပြောင်းလဲနိုင်သောအရာများသည်အာရုံစိုက်မှုနည်းသည်။ ထို့ကြောင့်ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုကွဲပြားခြားနားသောပုလ်အခန်းကဏ္ norm စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ကိုက်ညီမှုအတိုင်းအတာပြpornနာညစ်ညမ်းကြည့်ရှုဟောကိန်းထုတ်နှင့်ဤအသင်းအဖွဲ့များအလားအလာ Moderator စမ်းသပ်ပြီးဘယ်လောက်အတိုင်းအတာဆန်းစစ်ခဲ့သည်။
ကျား၊ မရေးရာအခန်းကဏ္ norm စံနှုန်းများသည်အပြုအမူများကိုပုလ်သို့မဟုတ်inတ္ကဲ့သို့သောလမ်းညွှန်နှင့်သတ်မှတ်သောစံနှုန်းများဖြစ်သည် (Mahalik, 2000) ။ အမျိုးသားများအတွက်၊ ပုလ်အခန်းကဏ္ norm စံနှုန်းများကိုလိုက်နာခြင်းသည်လူတစ် ဦး တစ်ယောက်၏ပုဂ္ဂလိကနှင့်လူမှုရေးဘ ၀ များတွင်လက်ခံနိုင်သောပုလ်အပြုအမူအတွက်လူမှုရေးမျှော်လင့်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီစေရန်ကြိုးပမ်းခြင်းဖြစ်သည်ဟုသတ်မှတ်သည် (Mahalik et al ။ 2003) ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ပုလ်စံနှုန်းများသည်ယဉ်ကျေးမှုနှင့်အခြေအနေအလိုက်ကွဲပြားသောကြောင့်ကွဲပြားသော“ ပုလ်” ကိုဖော်ပြသည့်မရေမတွက်နိုင်သောနည်းလမ်းများကြောင့်ဖြစ်သည် (Wong & Wester, 2016) ။ သို့သျောလညျးအကွံဉာဏျနှငျ့ဆေးပညာအတှကျစိတျဝငျစားပညာရှင်များကတင်းကျပ်စွာ Internalized သို့မဟုတ်ဖြည့်ဆည်းတဲ့အခါမှာပုလ်အခန်းကဏ္ norm စံချိန်စံညွှန်းအချို့ဖွဲ့စည်းပုံအထူးသဖြင့်ပြproblemနာဖြစ်နိုင်သည်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ ထိုယုံကြည်မှုများနှင့်စံနှုန်းများကိုအမျိုးသားများမည်သို့ထင်မြင်သင့်သည်၊ မည်သို့ပြုမူရမည်နှင့် ပတ်သက်၍ ရှေးရိုးဆန်သော၊ တင်းကျပ်သော၊ လိင်အရဆက်ဆံမှုနှင့်ကြီးစိုးသောအမြင်များဖြင့်မကြာခဏ“ ရိုးရာ” အခန်းကဏ္ norm စံများအဖြစ်ရည်ညွှန်းလေ့ရှိသည် (Levant & Richmond, 2016 ကိုကြည့်ပါ။ McDermott , Levant, Hammer, Borgogna, & Mckelvey, 2018) ။ Mahalik ၏ (၂၀၀၀) ကျားမအခန်းကဏ္ norm စံလိုက်နာမှုပုံစံတွင်ရိုးရာပုလ်စံများကိုဖော်ပြရန် (ပုံမှန်အားဖြင့်ပုလ်အပြုအမူများ၏သဘောထားများ)၊ တရားစီရင်ပိုင်ခွင့် (အပြုအမူများအားလူကြိုက်များသည်ဟုအတည်ပြုခြင်း / အတည်ပြုခြင်းမရှိခြင်း) နှင့်ပေါင်းစည်းခြင်း (အမျိုးသားများ၏အမြင်များ) မှတစ်ဆင့်ဆက်သွယ်သည် လူကြိုက်များယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာလုပ်ရပ်) စံချိန်စံညွှန်း။ လိုက်လျောညီထွေ, အလှည့်အတွက်, လူ့နှင့် intrapersonal ရလဒ်များအမျိုးမျိုးသြဇာလွှမ်းမိုး (Mahalik, 2000; Mahalik et al, 2000 ။ ) ။
factor ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းခေတ်ပြိုင်အနောက်တိုင်းလူ့အဖွဲ့အစည်းမှာကွဲပြားခြားနားသောရိုးရာပုလ်အခန်းကဏ္ဍစံချိန်စံညွှန်းများတည်ရှိမှုအဘို့ပင်ကိုယ်မူလထောက်ခံမှုလြှော့ပါပြီ။ အထူးသ Mahalik နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ (2003) 11 related ပေမယ့်ကွဲပြားစံချိန်စံညွှန်းဖော်ထုတ်: (အနိုင်ရမယ့် drive ကိုပါဝင်သောစံချိန်စံညွှန်း, အပြိုင်အဆိုင်ဖြစ်နှင့်ဆုံးရှုံးကိုကွောကျရှံ့), စိတ်ခံစားမှုကိုထိန်းချုပ် (စံချိန်စံညွှန်းကန့်သတ်စိတ်လှုပ်ရှားမှု, မသက်မသာခံစားခကျြမြား၏ဆှေးနှေးခပတျသကျ), အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေအနိုင်ရတဲ့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအမြိုးသမီးမြားအပျေါမှာပုလ်ကြီးစိုးနှငျ့ပတျသကျသောအမြိုးသမီးမြား (စံချိန်စံညွှန်းကျော် (ထိုကဲ့သို့သောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်ဖြစ်ခြင်းအဖြစ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်လူ့အန္တရာယ်များကိုယူမယ့် drive ကိုပါဝင်သောစံချိန်စံညွှန်း,), အကြမ်းဖက်မှု (စံချိန်စံညွှန်းအကြမ်းဖက်အပြုအမူနဲ့ပတ်သက်တဲ့နှင့်ဖြောင့်မတ်, အထူးသဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုနှင့်အခြားသူများအကြားအကြမ်းဖက်မှုများပါဝင်သော), ပါဝါ , စိတ်ခံစားမှုများနှင့်လူမှုရေးအရ), ကြီးစိုးအာဏာနှင့်ထိန်းချုပ်မှုများအတွက်လိုအပ်ပါဝင်သော (စံချိန်စံညွှန်း), ပလေးဘွိုင် (စံချိန်စံညွှန်း) မျိုးစုံလိင်မိတ်ဖက်ရှိသည်နှင့်ပေါ့ပေါ့လိင်အတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ဟာအလိုဆန္ဒအကြံပြုခြင်း, Self-မှီခို (စံချိန်စံညွှန်းရှာကြံ Self-မှီခိုရှိစေရေးနှင့်အကူအညီကန့်သတ် အပြုအမူ), အလုပျ၏အရေးပို (စံချိန်စံညွှန်းအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့်အလုပ်-related ကြိုးပမ်းဦးစားပေး), p ဖြစ်ခြင်း၏စိုးရိမ်မှုအပါအဝင်လိင်တူချစ်သူ (heterosexist နှင့် homophobic စံချိန်စံညွှန်းများအတွက်အထင်အမြင်သေး ) "လိင်တူချစ်သူ" အဖြစ် erceived နှင့်အဆင့်အတန်းကိုလိုက်ရှာ (ယောက်ျားရှိစေရေးစံချိန်စံညွှန်း) ဂုဏ်သတင်းလူမှုရေးရာထူးကိုလိုက်သင့်ပါတယ်။ မိဘနှင့် Moradi (2009, 2011) အပိုဆောင်းအချက်သရုပ်ခွဲအလုပ်ဖျော်ဖြေကိုးတိကျတဲ့စံချိန်စံညွှန်း ( "လိင်ကွဲ Self-တင်ဆက်မှု" ဖို့ "လိင်တူဆက်ဆံဘို့အထင်အမြင်သေး" အမည်ပြောင်းစဉ်အခြေအနေပြ၏လွှမ်းမိုးမှုကိုနှင့်လိုက်စားဖယ်ရှားခြင်း) ဤစာရင်းကိုလျှော့ချ။
သုတေသီများသည်ဤအစဉ်အလာအထီးအခန်းကဏ္ norm စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ကိုက်ညီမှုနှင့်ဆက်စပ်သောပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှင့်ဆက်နွယ်မှုဆိုင်ရာပြproblemsနာများကိုဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည် (Parent & Moradi, 2011; Wong, Ho, Wang, & Miller, 2017) ဥပမာအားဖြင့်လိင်ကွဲလိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုပြသည့်စံနှုန်းများနှင့်ကိုက်ညီခြင်းသည်အမျိုးသားများနှင့်လိင်ဆက်ဆံသောအမျိုးသားများတွင်အိပ်ချ်အိုင်ဗွီစစ်ဆေးခြင်းနှင့်အဆိုးဆက်စပ်နေသည် (Parent, Torrey, & Michael, 2012) ။ Playboy၊ မိမိကိုယ်ကိုအားကိုးခြင်းနှင့်စွန့်စားမှုများယူခြင်းစံနှုန်းများသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဆင်းရဲမှုနှင့်အပြုသဘောဆက်နွယ်မှုရှိသည် (Wong, Owen, & Shea, 2012) ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိန်းချုပ်မှုနှင့်မိမိကိုယ်ကိုအားကိုးခြင်း၏ပုလ်စံသတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီမှုသည်မိမိကိုယ်ကိုမုန်းတီးခြင်းနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွင့်ဟဖော်ထုတ်ခြင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်များ (Heath, Brenner, Vogel, Lannin, & Strass, 2017) ကအပြုသဘောဖြင့်ခန့်မှန်းထားသည်။ ဆက်စပ်မှုအားဖြင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိန်းချုပ်မှုနှင့်မိမိကိုယ်ကိုအားကိုးခြင်းစံနှုန်းများသည်ကောလိပ်ယောက်ျားများတွင်သေကြောင်းကြံစည်ခြင်းအတွေးများအတွက်အပြင်းထန်ဆုံးအနှုတ်လက္ခဏာကြိုတင်ခန့်မှန်းသူများ (McDermott et al ။ , 2017) နှင့်အမျိုးသားများ၏စိတ်ကျန်းမာရေးပြproblemsနာများအားလေ့လာမှုများစွာတွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည် (Wong) et al ။ , 2017) ။ သုတေသီများသည်အချို့သောပုလ်အခန်းကဏ္ norm စံများနှင့်ရဲစွမ်းသတ္တိ၊ ခံနိုင်ရည်နှင့်ခံနိုင်ရည်စသည်တို့ကဲ့သို့သောထူးကဲသောအားသာချက်များနှင့်ကိုက်ညီမှုအကြားအလယ်အလတ်၊ အပြုသဘောဆောင်သောဆက်နွယ်မှုများကိုတွေ့ရှိခဲ့သည် (Hammer & Good, 2010); သို့သော်သုတေသနတွေ့ရှိချက်များကရိုးရာပုလ်အခန်းကဏ္ norm စံနှုန်းများနှင့်ကိုက်ညီမှုကိုပျက်စီးစေသောသဘောသဘာဝကိုထောက်ခံသည် (ဥပမာ - Wong et al ။ , 2017) ။
ရိုးရာပုလ်အခန်းကဏ္ norm စံနှုန်းများနှင့်အမျိုးသားများ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ကာယကျန်းမာရေးဆိုင်ရာပြconformityနာများအကြားဆက်စပ်မှုများရှိနေသော်လည်းသုတေသနပြုသူအနည်းငယ်ကပြproblemနာဆိုင်ရာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြည့်ရှုခြင်းကိုဖြစ်နိုင်ချေရှိသောဆက်စပ်မှုအဖြစ်ဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်။ သုတေသီများမှခေတ်မီညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေတွင်ပါဝင်သောအကြောင်းအရာများသည်ရိုးရာပုလ်ကျားမအခန်းကဏ္ norm စံချိန်စံညွှန်းများ (Borgogna, McDermott, Browning, Beach, & Aita, 2018; Bridges, Wosnitzer, Scharrer, Sun, & Liberman, 2010; Dines, 2006) နှင့်ပြည့်စုံသည်ဟုစောဒကတက်ကြသည်။ Fritz & ပေါလု, 2017) ။ ထို့ကြောင့် Mahalik ၏အခန်းကဏ္ norm စံလိုက်ဖက်မှုစံနစ်နှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ရှုခြင်းကြောင့်ပြproblemsနာများကြုံတွေ့ရနိုင်သည့်အလားအလာများအကြားအယူအဆဆိုင်ရာချိတ်ဆက်မှုများစွာပေါ်ထွက်လာနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အမျိုးသားများသည်ပလေးဘွင့်စံနှုန်းများနှင့်ကိုက်ညီမှုကိုမကြာခဏနှင့်လိင်ဆက်ဆံဖက်အမျိုးသမီးများနှင့်လိင်ဆက်ဆံလိုသောဆန္ဒကိုဖော်ပြသည် (Mahalik et al ။ , 2000) ။ အမှန်စင်စစ်အပြာစာပေရုပ်ပုံများသည်အမျိုးသားလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အမြောက်အများနှင့်လိင်ဆက်ဆံသောယောက်ျားများကိုပုံဖော်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ အချို့သောအမျိုးသားများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်းသို့မဟုတ်ပလေးဘွိုင်၏စံနှုန်းအတိုင်းလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကိုအန္တရာယ်ရှိစေနိုင်သည်။ ထို့အပြင်အမျိုးသမီးများစံချိန်စံညွှန်းအပေါ်ပါဝါကအမျိုးသမီးများသည်အမျိုးသားများအားလက်အောက်ခံသင့်ကြောင်းအကြံပြုသည် (Mahalik et al ။ , 2003) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသည်အမျိုးသားများအားအကန့်အသတ်မရှိသောအမျိုးသမီးများအားကြည့်ရှုရန်ခွင့်ပြုသည်။ ယောက်ျားများအပျော်အပါးအတွက်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည့် ၀ တ်စားဆင်ယင်သည့်နေရာများ (Fritz & Paul, 2003) ။ Social Script သီအိုရီ (Simon & Gagnon, 2017) နှင့်လိင်ဆိုင်ရာမီဒီယာလူမှုဆက်ဆံရေး၏လိင်မှုဆိုင်ရာဇာတ်ညွှန်းကိုရယူခြင်း၊ ပြန်လည်အသက်သွင်းခြင်း၊ လျှောက်လွှာပုံစံ (1986AM) (Wright, 3; Wright & Bae, 2011) နှင့်ကိုက်ညီမှုရှိသည်။ ထိုကဲ့သို့သောပစ္စည်းများကိုကြည့်ရှုသူများသည်သူတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်များနှင့်အတူထိုကဲ့သို့သောအပြုအမူများကိုပြုမူကြသည် (Bridges, Sun, Ezzell, & Johnson, 2016; Sun, Bridges, Johnson, & Ezzell, 2016; Sun, Miezan, Lee, & Shim, 2016) ။ အလားအလာရှိသောဆက်ဆံရေးပြcausingနာများသို့မဟုတ်အကြမ်းဖက်မှုဆိုင်ရာပင်မကိစ္စများ (Bergner & Bridges, 2015; Brem et al ။ , 2002; Bridges, Bergner, & Hesson-McInnis, 2018; Manning, 2003; Perry, 2006a, 2017; Wright, Tokunaga, & ဖြစ်နိုင်သည်) Kraus, 2018; Wright, Tokunaga, Kraus, & Klann, 2016; Zitzman & ဘတ္, 2017) ။
အခြားသောစံသတ်မှတ်ချက်များသည်အရံအဆက်များနှင့်ပိုမိုဆက်စပ်နေနိုင်သော်လည်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောအချက်များနှင့်လည်းကိုက်ညီနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အကြမ်းဖက်မှုစံနှုန်းများအရအမျိုးသားများသည်ကြမ်းတမ်းပြီးရန်လိုသင့်သည် (Mahalik et al ။ , 2003) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအားဖြင့်လူကြိုက်များသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများတွင်မကြာခဏဖြစ်ပွားလေ့ရှိသည်။ ယောက်ျားများသည်အမြဲတစေကျူးလွန်သူနှင့်အမျိုးသမီးများသည်ပစ်မှတ်ထားခံရခြင်းနှင့်အတူ (Bridges et al ။ , 2010; Fritz & Paul, 2017; Klaassen & Peter, 2015; Sun, Bridges, Wosnitzer, Scharrer, & Liberman, 2008) ။ ဆက်စပ်မှုအရစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိန်းချုပ်မှုစံနှုန်းများအရအမျိုးသားများသည်အထူးသဖြင့်အပျက်သဘောဆောင်သောစိတ်ခံစားမှုများနှင့်ဆိုင်သောစိုးရိမ်မှုများအတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖော်ပြမှုကိုရှောင်သင့်ကြောင်းအကြံပြုသည် (Mahalik et al ။ , 2003) ။ ပြhealthနာဆိုင်ရာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုသူများသည်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုစိတ်ကျန်းမာရေးပြesနာများမှလွတ်မြောက်ရန်နည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ်ဖော်ပြကြသည် (Kor et al ။ , 2014; Perry, 2017b) သို့မဟုတ်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန်နည်းလမ်းတစ်ခု (Cortoni & Marshall, 2001; Laier, Pekal, & Brand, 2015) ။ ထို့ကြောင့်အချို့သောအမျိုးသားများအတွက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြည့်ခြင်းကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းရန်လူမှုရေးအရလိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေသည့်နည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ်ယူဆနိုင်သည် (Borgogna, McDermott, Browning, et al ။ , 2018)
စာပေ၏တစ်ဦးကသေးငယ်တဲ့ဒါပေမယ့်ကြီးထွားလာခန္ဓာကိုယ်တရားဝင်ရိုးရာပုလ်အခန်းကဏ္ဍစံချိန်စံညွှန်း (သို့မဟုတ်ဆက်စပ်-Construction) နှင့်ပြဿနာညစ်ညမ်းကြည့်ရှုရန်ညီအကြားအသင်းအဖွဲ့များလေ့လာခဲ့သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ဤတွေ့ရှိချက်များအစဉ်အလာပုလ်အခန်းကဏ္ဍစံချိန်စံညွှန်းကိုက်ညီသူကိုယောက်ျား သာ. ကြီးမြတ်ကြိမ်နှုန်းနှင့်အတူညစ်ညမ်းကြည့်ရှုညစ်ညမ်းကြည့်ရှုရန်နှင့်ဆက်စပ်သောပုဂ္ဂိုလ်ရေးသို့မဟုတ် relational ပြဿနာများအစီရင်ခံရန်ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, Szymanski နှင့် Stewart က-ရစ်ချတ်ဆန် (2014) ပုလ်ကျားမအခန်းကဏ္ဍပဋိပက္ခနှင့်ယောက်ျားရဲ့ဆက်ဆံရေးဟာအရည်အသွေးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှု၏ခန့်မှန်းအဖြစ်ကြည့်ရှုပြဿနာညစ်ညမ်းအကြားအပြုသဘော link ကိုဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ အလားတူပင် Borgogna et al ။ (2018) ထိုသို့သောလူတို့သညျအားနည်းချက်စိတ်ခံစားမှုပြသဣတ္အပြုအမူတွေကိုရှောင်ကြဉ်လျက်နှင့်မသင့်ကြောင်းယုံကြည်ချက်အဖြစ်ယောက်ျားရဲ့ရိုးရာပုလ်အယူဝါဒ, အပြုသဘောပြဿနာညစ်ညမ်း၏ကွဲပြားရှုထောင့်ထိုကဲ့သို့သောအလုပ်လုပ်တဲ့ပြဿနာများအဖြစ်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်အပျက်သဘောဆောင်သောစိတ်ခံစားမှုကိုရှောင်ကြဉ်ရန်ညစ်ညမ်းသုံးပြီးနှင့်ဆက်နွယ်ခဲ့။ တှေ့ရှိ
ထွက်ပေါ်လာသောအထောက်အထားများအရအချို့သောပုလ်စံနှုန်းများကိုလိုက်နာခြင်းသည်ပြpornနာရှိသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြည့်ရှုခြင်းနှင့်လည်းဆက်စပ်မှုရှိနိုင်သည်။ အထူးသဖြင့်ပုဂံအခန်းကဏ္ role စံနှုန်းများနှင့်ကိုက်ညီမှုကိုတိုင်းတာသည့်တစ်ခုတည်းသောလေ့လာမှုတွင် Mikorski နှင့် Szymanski (2017) သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ခြင်း၊ ပလေးဘွိုင်စံများနှင့်အကြမ်းဖက်မှုစံနှုန်းများသည်အမျိုးသားများအားအမျိုးသမီးများအားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းထားသည်။ ဤတွေ့ရှိချက်များသည်အမျိုးသားများ၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြည့်ရှုခြင်း၊ အထူးသဖြင့်အကြမ်းဖက်မှုဆိုင်ရာညစ်ညမ်းစာပေများကြည့်ရှုခြင်းသည်အမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်မှုညွှန်းကိန်းများနှင့်ဆက်စပ်ကြောင်းယခင်သုတေသနနှင့်ကိုက်ညီခဲ့သည် (Hald, Malamuth, & Yuen, 2010; Hald & Malamuth, 2015; Seabrook, Ward, & Giaccardi , 2018; Wright & Tokunaga, 2016; Ybarra, Mitchell က, Hamburger, Diener-West, & Leaf, 2011) ။
ရိုးရာပုလ် (ဥပမာ - စံသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အယူအဆများ) ကိုပြaticနာရှိသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည့်သက်သေအထောက်အထားများထွက်ပေါ်လာသော်လည်း ထပ်မံ၍ လုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သည်။ ပြproblemနာအပြာစာပေရုပ်ပုံကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှင့်ဆက်နွယ်မှုဆိုင်ရာပြproblemsနာများကြောင့်အမျိုးသားများအနေနှင့်အချို့သောပုလ်အခန်းကဏ္ norm စံများနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများပြproblemsနာများအကြားဆက်နွယ်မှုကိုခြယ်လှယ်သူများအားခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းသည်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနှင့်ကုသမှုကိုအသိပေးနိုင်သည်။ အမှန်စင်စစ်, ပုလ်သုတေသီများပုလ်၏အသုံးအနှုန်းများနှင့်ပြproblemနာရလဒ်များအကြားဆက်စပ်မှုကွဲပြားကြောင်းအသိအမှတ်ပြုခဲ့ကြသည် (Levant & Richmond, 2016; O'Neil, 2015) ။ ဆိုလိုသည်မှာရိုးရာပုလ်အခန်းကဏ္ role စံနှုန်းများကိုလိုက်နာသူတိုင်းပြproblemsနာများမကြုံတွေ့ရပါ။ အများအပြားကွဲပြားခြားနားချက် variable တွေကိုရိုးရာပုလ်၏အန္တရာယ်ရှိသောသက်ရောက်မှုအလယ်အလတ်။
တချို့ယောက်ျား rigidly စံချိန်စံညွှန်း masculine မှ overconform အဘယ်ကြောင့် (ဥပမာအနိမ့် Self-လေးစားမှုအဖြစ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးမလုံခြုံမှုကြောင့်မှတ်သားဆိုလိုသည်မှာ,) တစ်ဦးထိခိုက်လွယ်ပုလ်မိမိကိုယ်ကိုရှင်းပြစေခြင်းငှါ, ဒါပေမဲ့တခြားလူတို့သညျပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြမနည်းလမ်းတွေထဲမှာပုလ်ဖော်ပြကြောင်းစောဒကတက်ကြသူသဘောတရားပညာရှင်တွေရဲ့နှင့်ကိုက်ညီ နှင့်ဆက်စပ်ပြဿနာများ (cf, Blazina, 2001), ကျနော်တို့အခန်းကဏ္ဍစံချိန်စံညွှန်း masculine မှရသောကိုက်ညီဖို့ဒီဂရီလွှမ်းမိုးနေတဲ့အလားအလာက Moderator အဖြစ် Self-လေးစားမှုအကြံပြုပြဿနာညစ်ညမ်းကြည့်အပြုအမူတွေကိုအကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ မြင့်မားတဲ့ Self-လေးစားမှုဆက်ဆံရေးအားနည်းသွားသင့်တယ်, သော်လည်းအထူးသနိမ့် Self-လေးစားမှု, အခန်းကဏ္ဍကိုစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု masculine မှညီညွတ်မှုအကြားဆက်ဆံရေးဟာအားကောင်းနှင့်ဆက်စပ်ရပါမည်။
ထိုသို့သောအခိုင်အမာပြောဆိုချက်ကိုအမျိုးသားများအစဉ်အလာအခန်းကဏ္ norm စံနှုန်းများကိုတင်းကျပ်စွာလိုက်နာခြင်းသည်အပျက်သဘောဆောင်သောရှုမြင်ချက်များနှင့်ဆက်စပ်နေသည်ဟူသောတွေ့ရှိချက်များကထောက်ခံခဲ့သည် (Fischer, 2007; McDermott & Lopez, 2013; Schwartz, Waldo, & Higgins, 2004; Yang, Lau, Wang, Ma, & Lau, 2018) ။ ထို့အပြင် Self- ဝိသေသလက္ခဏာသီအိုရီ (Tajfel & Turner, 1986) ကဲ့သို့သောလူမှုရေးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသီအိုရီများခေတ်သစ်တိုးချဲ့မှုများသည်ပျက်စီးလွယ်သောပုလ်ပုံစံတည်ရှိမှုကိုထပ်မံထောက်ခံသည်။ ဥပမာအားဖြင့်အမျိုးသားများ၏ပုလ် - ဆက်ပြောသည့်မိမိကိုယ်ကိုလေးစားမှုသည်ရိုးရာပုလ်အယူအဆများနှင့်အပြုသဘောဆက်နွယ်မှုရှိသည် (Burkley, Wong, & Bell, 2016) ။ အမှန်မှာ၊ ထိန်းချုပ်ထားသောဓာတ်ခွဲခန်းဆိုင်ရာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများအရအမျိုးသားများသည်ပုလ်ခြိမ်းခြောက်ခြင်းကိုခံနေရသည်ဟုသိသောအခါအမျိုးသားများသည်ရိုးရာပုံစံသို့မဟုတ်ပုံစံအမျိုးမျိုးပုလ်အပြုအမူများကိုလုပ်ဆောင်နိုင်ဖွယ်ရှိသည် (ဥပမာ - Precarious Manhood; Vandello & Bosson, 2013) ။
အတူတူယူ, ပုလ် variable တွေကိုနှင့် Self- လေးစားမှုအကြားဆက်သွယ်မှုကိုဆန်းစစ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေမလုံခြုံယောက်ျားသူတို့ရဲ့ပုလ်နှင့်ဆက်စပ်သောပြproblemsနာများကိုတွေ့ကြုံခံစားဖို့အထူးသဖြင့်ကျရောက်နေတဲ့ဖြစ်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်ပိုမိုမြင့်မားသောကိုယ့်ကိုယ်ကိုလေးစားမှုရှိသည့်အမျိုးသားများသည်သူတို့၏ပုဆိန်များကိုထိုကဲ့သို့သောတင်းကျပ်။ ပြproblemနာများဖော်ပြရန်နည်းပါးသည်။ နှိုင်းယှဉ်မှုနည်းပါးသောသုတေသနသည်မိမိကိုယ်ကိုလေးစားမှု၏အလယ်အလတ်အဆင့်ကိုလေ့လာခဲ့ပြီးမည်သည့်လေ့လာမှုများမှပြproblemနာရှိသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ပုလ်နှင့်စပ်လျဉ်း။ မိမိကိုယ်ကိုလေးစားမှုကိုလေ့လာခြင်းမရှိသော်လည်းစာပေသေးသေးလေးသည်ထိုကဲ့သို့သောစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကိုထောက်ခံသည်။ သာဓကအားဖြင့်သုတေသီများတွေ့ရှိချက်အရပုဂလိကသဘောတရားများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်စွန်းကွက်မှုအကြားဆက်စပ်မှုသည်လိင်အဆင့်အတန်းနိမ့်ကျသောအမျိုးသားများအတွက်သိသိသာသာပိုမိုအားကောင်းခဲ့သည် (Mellinger & Levant, 2014) ။ အလားတူပင် Heath et al ။ (2017) မကြာသေးမီကဖော်ထုတ် Self- လေးစားမှု, Self- သနားခြင်းကရုဏာစိတ် (Neff, 2003), စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိန်းချုပ်မှုနှင့် Self- မှီခိုစံချိန်စံညွှန်းမှယောက်ျား၏လိုက်နာမှုအကြားအသင်းအဖွဲ့များအလယ်အလတ်နှင့်ရှာကြံကူညီကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည် မိမိကိုယ်ကိုအထင်ကြီးလေးစားမှုရှိသည့်အမျိုးသားများသည်သူတို့၏လေ့လာမှုတွင်ပုလ်စံသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အတိုင်ပင်ခံအတားအဆီးများအကြားအားအနည်းဆုံးအသင်းအဖွဲ့များကိုသက်သေပြခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့သောတွေ့ရှိချက်များအရမိမိတို့ကိုယ်ကိုကြိုက်နှစ်သက်သည့်အမျိုးသားများသည်အစဉ်အလာအရအမျိုးသားများ၏အခန်းကဏ္ to နှင့်အညီလိုက်လျောညီထွေမှုမရှိခြင်း၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသို့မဟုတ်ဆက်ဆံရေးကိုကန့်သတ်ခြင်းများကိုဖြစ်စေသည်။
သဘောတရား, Self-လေးစားမှုဖွယ်ရှိရာတစျခု (ဒီအခြေအနေမျိုးအတွက်, ပြဿနာညစ်ညမ်းကြည့်ရှု) ကျား, မအခန်းကဏ္ဍစံချိန်စံညွှန်းနှင့်ထိုစံချိန်စံညွှန်းများဆက်စပ်ပြဿနာအသုံးအနှုန်းတွေနှင့်အတူညီဖို့ဒီဂရီသြဇာလွှမ်းမိုး။ ဥပမာအားဖြင့်နိမ့် Self-လေးစားမှုနှင့်အတူလူတယောက်ျားကွဲပြားခြားနားသောမိတ်ဖက် (ဆိုလိုသည်မှာပလေးဘွိုင်စံချိန်စံညွှန်း) နဲ့လိင်အများကြီးရှိခြင်းရပါမည်အကြံပြုကြောင်းစံချိန်စံညွှန်းယုံကြည်ဖို့ပိုပြီးကျရောက်နေတဲ့ဖြစ်နိုင်သည်။ ဤသူသညျရှာနေအပြည့်အဝ In-Vivo ကို "ပလေးဘွိုင်" ဖြစ်ခြင်းကိုတွေ့ကြုံခံစားရန်သူ၏ပျက်ကွက်ခဲ့ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သည်သူ၏အနုတ်လက္ခဏာစိတ်ခံစားမှုကိုစီမံခန့်ခွဲဖို့မျိုးစုံမိတ်ဖက်တွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ညစ်ညမ်းသုံးနိုင်ပါသည်။ ပြောင်းပြန်မြင့်မား Self-လေးစားမှုနှင့်အတူလူတလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်သူ၏အရေအတွက်ကအားရကျေနပ်မှုခံစားရဖို့ပိုပြီးဖွယ်ရှိပါလိမ့်မည်။ သူသည်ထိုကြောင့်, ရှာနေသည့်ပလေးဘွိုင်စံချိန်စံညွှန်းကိုက်ညီရန်ညစ်ညမ်းအပေါ်မှီခိုဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ သို့သော်ပုလ်အခန်းကဏ္ဍစံချိန်စံညွှန်း, ပြဿနာညစ်ညမ်းကြည့်နှင့် Self-လေးစားမှုဆန်းစစ်သုတေသန၏ဆွေမျိုးရှားပါးမှုအခက်အခဲပေးထားသောဤ variable တွေကိုဖြတ်ပြီးဆက်လက်စာမေးပွဲနေဆဲလိုအပ်ပါသည်။
နောက်ထပ်သုတေသနရိုးရာပုလ်အခန်းကဏ္ဍစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ပြဿနာညစ်ညမ်းကြည့်ရှုရန်ယောက်ျားရဲ့ညီအကြားအလားအလာအသင်းအဖွဲ့များဆနျးစစျဖို့လိုတယျ။ ထို့အပြင်ထိုကဲ့သို့သောဆက်ဆံရေးအိပ်ရေးဝြခင်းသို့မဟုတ်ပိုမိုဆိုးရွားစေခြင်းငှါအရာ variable တွေကိုဖော်ထုတ်အကြံပေးခြင်းသို့မဟုတ်ကာကွယ်တားဆီးရေးအဘို့အအရေးကြီးသောသတင်းအချက်အလက်များသည်ဖြစ်နိုင်သည်။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုယောက်ျား၏ကြီးမားသောနမူနာအတွက်ပြဿနာညစ်ညမ်းကြည့် variable တွေကိုများ၏ခန့်မှန်းအဖြစ်အခန်းကဏ္ဍ masculine မှညီညွတ်မှု၏အခန်းကဏ္ဍကိုဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ နှစျခုယူဆချက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းလမ်းပြတော်မူ၏။ ပထမဦးစွာ (H1), ကြိုတင်သုတေသနနှင့်သီအိုရီဆက်သွယ်မှု (Borgogna, McDermott, Browning, သဲသောင်ပြင်, & Aita, 2018; Mikorski & Szymanski, 2017; Szymanski & Stewart-Richardson, 2014), ငါတို့အမျိုးသမီးများ, ကစားသမား, အကြမ်းဖက်မှုနှင့်အကြမ်းဖက်မှုအပေါ်ပါဝါယူဆ; စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိန်းချုပ်မှုစံနှုန်းများပြproblemနာညစ်ညမ်းကြည့်ရှုဆောက်လုပ်ရေး၏ကြိုတင်ခန့်မှန်းပါလိမ့်မယ်။ သို့သော်စူးစမ်းရှာဖွေခြင်းဆိုင်ရာနည်းလမ်းတစ်ခုအနေဖြင့်ပြproblemနာရှိသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ရှုခြင်းနှင့် ဆက်စပ်၍ တိုင်းတာထားသောပုလ်စံနှုန်းများကိုကျွန်ုပ်တို့စမ်းသပ်ခဲ့သည်။ ဒုတိယ (H2), ပျက်စီးလွယ်ပုလ် - မိမိကိုယ်ကိုနှင့်မရေရာသောယောကျ်ားပါရာဒိုင်းနှင့်အတူတသမတ်တည်း (cf, Blazina, 2001; Vandello & Bosson, 2013), ကျနော်တို့မြင့်မားသောမိမိကိုယ်ကိုလေးစားမှုပုလ်စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ပြproblemနာကိုညစ်ညမ်းကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ကိုက်ညီမှုအကြားဆက်ဆံရေးကိုအနှောက်အယှက်ပေးသောတစ် ဦး Moderator အဖြစ်ဆောင်ရွက်ရန်မယ်လို့ယူဆ မိမိကိုယ်ကိုလေးစားမှုနိမ့်ကျခြင်းကဆက်ဆံရေးကိုပိုမိုဆိုးရွားစေသည်။
သင်တန်းသားများကို / လုပ်ထုံးလုပ်နည်း
ပြည်တွင်းရေးပြန်လည်သုံးသပ်ဘုတ်အဖွဲ့ခွင့်ပြုချက်ပြီးနောက်သင်တန်းသားများကိုအဆိုပါလူမှုစိတ်ပညာကွန်ယက် Listserv, အ Net က Listserv အပေါ်စိတ်ဓာတ်သုတေသန Craigslist အပေါ်တင်နှင့် Reddit အပေါ်တင်မှတဆင့်နောက်ထပ် snowball နမူနာအတူတစ်စိတ်ပညာဦးစီးဌာနဘာသာရပ်ရေကူးကန် (SONA) ကနေတဆင့်အွန်လိုင်းစုဝေးကြ၏။ အဆိုပါလေ့လာမှုကိုအမျိုးသားများတွင်အထူးယေဘုယျလူမှုရေးသဘောထားနှင့်အပြုအမူရှာဖွေစူးစမ်းစစ်တမ်းတစ်ခုအဖြစ်ကြော်ငြာခဲ့ပါတယ်။ အားလုံးတူရိယာအမိန့်သက်ရောက်မှုကိုရှောင်ကြဉ်ရန် randomized ခဲ့ကြသည်။ သင်တန်းသားများကိုအပို-အကြွေးကိုကမ်းလှမ်းခဲ့သည်, ထို snowball လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအားဖြင့်ပါဝင်သူတွေကိုလုပ်နိုင်သောတဦးတည်း $ 100 ဗီဇာ-လက်ဆောင်ကတ်များများအတွက် Raffles ဝင်နိုင်ဘာသာရပ်ရေကူးကန်မှတစ်ဆင့်သိမ်းယူကြ၏။ အစပိုင်းမှာ 868 သင်တန်းသားများကိုလေ့လာမှုမှတုန့်ပြန်; သို့သော် 18 ထက်ငယ်ရွယ်သောအမျိုးသမီးများ, လိင်, ဖြစ်ဘူးသောသူသင်တန်းသားများကိုဖယ်ရှားပြီးနောက်, အာရုံစူးစိုက်မှုစစ်ဆေးမှုများပျက်ကွက်နှင့် / သို့မဟုတ်တစ်ဦးချင်းစီတိုင်းတာမဆိုအချက်၏ထက်နည်း 80% ပြီးစီး, သာ 520 ယောက်ျားနျြရစျ။ စားပွဲတင် 1 အပြည့်အဝနမူနာများ၏လူဦးရေအချိုးအစားပျက်ပြားပေးပါသည်။
လူဦးရေအချိုးအစားပုံစံ. သင်တန်းသားများကိုသူတို့ရဲ့လိင်, အသက်အရွယ်, လိင်, လူမျိုးရေး, ကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေ, အဆင့်ကို-of ပညာရေးပြီးစီးခဲ့, ကျောင်းသားအခြေအနေ, နှင့်ဘာသာရေးဆက်နွယ်မှုညွှန်ပြခိုင်းတယ်. ညစ်ညမ်းသောလူ ဦး ရေစာရင်းကိုအောက်ပါအချက်များဖြင့်တိုင်းတာသည် (နှစ်မျိုးစလုံးကိုပြproblemနာအပြာစာပေကြည့်ရှုခြင်းတွင်လေ့လာခဲ့သည်။ ဥပမာ Borgogna & McDermott, 2018) -အတိတ် 12 လအတွင်းပျမ်းမျှအပေါ်ဘယ်လိုမကြာခဏသင်သည်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိညစ်ညမ်းဝင်ရောက်ပြီလော"1 ။ အတိတ် 12 လအတွင်းညစ်ညမ်းဝင်ရောက်ကြပြီမဟုတ်,2။ လွန်ခဲ့သောနှစ်တွင်တစ်ဦးကအကြိမ်အနည်းငယ်,3။ အနည်းငယ်ကြိမ်လ,4။ တစ်ဦးကအကြိမ်အနည်းငယ်တစ်ပါတ်,5။ အကြောင်းနေ့စဉ်။ နှင့်အညီ, "အဘယ်အရာကိုနှစ်အရွယ်မှာသင်ပထမဦးဆုံးအမြင်ညစ်ညမ်းလုပ်ခဲ့တယ်? "babyish လိင်စိတ်နိုးထ (Kalman, 2008) ၏ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်လိင်ကိစ္စလှုပ်ရှားမှုပုံဖော်ထားတဲ့ပစ္စည်းများ, ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများနှင့် / သို့မဟုတ်အတွေ့အကြုံများကိုကြည့်ရှုအဖြစ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရသည်။
ပြဿနာညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုစကေး. ပြProbleနာရှိသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအသုံးပြုမှုစကေး (PPUS; Kor et al ။ , 2014) သည်ပြpornနာရှိသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ရှုခြင်း၏ရှုထောင့် ၄ ခုပါ ၀ င်သည့် ၁၂ ချက်ပါအတိုင်းအတာဖြစ်သည်။ Kor et al မှသတ်မှတ်ထားသောအချက် ၄ ချက်ပါသောမော်ဒယ်ကြောင့် PPUS သည်တစ်ခုတည်းသောဆောက်လုပ်ရေးကိရိယာများထက်အားသာချက်ရှိသည်။ (12) ။ အထူးသဖြင့် PPUS အနေဖြင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများသည်အဆက်အသွယ်များ (ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်အချစ်ဇာတ်လမ်း) တွင်ပြproblemsနာများ၊ အပျက်သဘောဆောင်သောစိတ်ခံစားမှုများမှလွတ်မြောက်ရန်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများမည်မျှအသုံးပြုသည်၊ ပြproblemနာဆိုင်ရာအသုံးပြုမှုအမြင်များကိုသိမြင်စေရန် (ဥပမာ၊ , Exline, Pargament, ချိတ်, & Carlisle တို့, 2014; ။ Grubbs, ပယ်ရီ, et al, 2015; ။ Grubbs, Wilt, et al, 2018; Wilt, Cooper က, Grubbs, Exline, & Pargament, 2018) ။ အကြောင်းရင်းများတွင်စိတ် ၀ င်စားမှုနှင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာပြproblemsနာများ (FP;“ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အခြားလူများ၊ လူမှုရေးအခြေအနေများ၊ အလုပ်ခွင်၌ဖြစ်စေ၊ ကျွန်ုပ်၏ဘဝ၏အခြားအရေးကြီးသောကဏ္significantများတွင်ပါပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးတွင်သိသာသောပြproblemsနာများကိုဖြစ်စေသည်”) α = .75), အလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်း (အီးယူ; "ငါစီစဉ်ခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းသုံးပြီးအလွန်အကျွံအချိန်ဖြုန်း" α = .89), ထိန်းချုပ်မှုအခက်အခဲများ (CD ကို; "ငါညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်ရပ်တန့်မနိုင်ခံစားရ" α = .90), နှင့်ထွက်ပေါက် / ရှောင်ရှားခြင်းအဘို့အအနုတ်လက္ခဏာစိတ်ခံစားမှု (ANE ကိုအသုံးပြုဖို့; "ငါသည်ငါ၏ဝမ်းနည်းခြင်းမှလွတ်မြောက်ရန်သို့မဟုတ်အပျက်သဘောခံစားချက်တွေကိုထံမှကိုယ့်ကိုယ်ကိုလွတ်မြောက်စေရန်ညစ်ညမ်းပစ္စည်းများကိုသုံးပါ," α = .92) ။ items (က Likert-type အမျိုးအစားစကေးအပေါ်ရမှတ်တွေ1-ဘယ်တော့မှစစ်မှန်တဲ့ သို့ 6-နီးပါးအမြဲစစ်မှန်တဲ့) ။ အချက်လေးချက်မော်ဒယ်မူရင်းအတည်ပြုချက်ကိုအတည်ပြုအတည်ပြုသည့်အချက်အားဆန်းစစ်ခြင်းအပြင်ပြproblemနာဆိုင်ရာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြည့်ရှုခြင်း (ဥပမာ Borgogna, McDermott, Browning, Beach, & Aita, 2018) မှအတည်ပြုခဲ့သည်။ စကေးနောက်ထပ်သင့်လျော်သော convergence သရုပ်ပြခြင်းနှင့်တရားဝင်မှုတည်ဆောက်ခဲ့သည် (Kor et al ။ , 2014) ။
ပုလ်စံနှုန်းများ Inventory မှကိုက်ညီ - 46 ။ Masculine Norms Inventory-46 (CMNI-46; Parent & Moradi, 2009) နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ခြင်းမူရင်း 94-item CMNI ၏အတိုကောက်ဗားရှင်း (Mahalik et al, 2003) ။ CMNI-46 သည်အနောက်တိုင်းလူ့အဖွဲ့အစည်းမှပေါ်ထွက်လာသောပုလ်ကျားမအခန်းကဏ္ norm စံနှုန်းများနှင့်ကိုက်ညီမှုကိုအကဲဖြတ်သည်။ CMNI-46 သည်ကိုးချက်ပါသောအတိုင်းအတာဖြစ်ပြီး၎င်းသည်အနိုင်ရခြင်းအတွက်အကြေးများပါ ၀ င်သည်။ α = .86), စိတ်ခံစားမှုကိုထိန်းချုပ် ( "ငါသည်ငါ့ခံစားချက်တွေကိုဝေမျှဘယ်တော့မှ" α = .88), အန္တရာယ်ဆည်းပူးနေ ( "ငါအန္တရာယ်များကိုယူပြီးပျော်မွေ့," α = .83), အကြမ်းဖက်မှု ( "တခါတရံမှာအကြမ်းဖက်အရေးယူမှု, လိုအပ်သောဖြစ်ပါတယ်" α = .86), အမြိုးသမီးမြားကိုကျော်ပါဝါ ( "ယေဘုယျအားဖြင့်ငါ, ငါ၏အသက်တာ၌အမြိုးသမီးမြားကိုထိန်းချုပ်ရန်" α = .80), ပလေးဘွိုင် ( "ငါတတျနိုငျသလျှင်, ငါမကြာခဏလိင်ဆက်ဆံဖက်ကိုပြောင်းမယ်လို့" α = .79), Self-မှီခို ( "ငါအကူအညီတောငျးမုန်း" α = .84), အလုပျ၏အရေးပို ( "ကျွန်မရဲ့အလုပ်, ငါ၏အသက်တာ၏အရေးအပါဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်" α = .77), နှင့်လိင်ကွဲ Self-တင်ဆက်မှု ( "တစ်စုံတစ်ဦးကိုငါလိင်တူချစ်သူထင်လျှင်ငါပြင်းထန်သောပါလိမ့်မယ်," α = .88) ။ items (1 နေ Likert စကေးအပေါ်ရမှတ်တွေပြင်းပြင်းထန်ထန်သဘောမတူ) (4 မှပြင်းပြင်းထန်ထန်သဘောတူကြောင်း, အထူးသဖြင့်ပုလ်စံပိုမိုအားကောင်းလိုက်နာမှုကိုညွှန်းမြင့်မားရမှတ်များနှင့်အတူ။ CMNI-46 သည် 94-item CMNI နှင့်သင့်လျော်သော convergence နှင့် validity တည်ဆောက်မှုနှင့်မြင့်မားသောဆက်နွယ်မှုရှိသည်ဟုပြသခဲ့သည် (Parent & Moradi, 2009, 2011; Parent, Moradi, Rummell, & Tokar, 2011) ။
self-Like / self-ကျွမ်းကျင်လိမ္မာမှုစကေး။ Self-Liking / Self-Competence Scale ဆိုသည်မှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားမှု (၂၀) ​​ပါသည့် Self- အစီရင်ခံစာကိုတိုင်းတာသည် (Tafarodi & Swann Jr, 20) ။ အဆင်ပြေစေရန်ကျွန်ုပ်တို့သည် (၁၀) ပုဒ်ပါမိမိကြိုက်နှစ်သက်သည့် subscale ကိုအထူးအသုံးပြုခဲ့သည်။ α ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတိုင်းအတာအဖြစ် = .94) ။ မေးခွန်းလွှာနေ 5-အမှတ် Likert စကေးအပေါ်အပြုသဘောနှင့်အဆိုးကူညီမှုတစ်စုံတစ်ရာလုပ်နေတဲ့ပစ္စည်းထားရှိရေး ပြင်းပြင်းထန်ထန်သဘောမတူ သို့ ပြင်းပြင်းထန်ထန်သဘောတူသည်။ တစ်ပြိုင်နက်တည်းနှင့် convergence တရားဝင်မှုများအတွက်အထောက်အထားကန ဦး validation ကို (Tafarodi & Swann, Jr. , 1995) တွင်သရုပ်ပြခဲ့သည်။
ကျနော်တို့ကအစပိုင်းမှာပျောက်ဆုံးနေတန်ဖိုးများကိုပုံမှန်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့်ဘေးထွက်မသိချင်ယောင်အဆောင်ဘို့ငါတို့ data ကိုပြ။ ကျနော်တို့ပြီးတော့လေ့လာအားလုံး variable တွေကိုဖြတ်ပြီး bivariate ဆက်စပ်အကဲဖြတ်။ မူလတန်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအတွက် spurious ဆက်ဆံရေးနှင့်ဖိနှိပ်မှုသက်ရောက်မှုများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုလျှော့ချရန်, အနည်းဆုံးပြဿနာညစ်ညမ်းသည့် bivariate အဆင့်မှာဒိုမိန်းကြည့်ရှုအတူသိသိသာသာဆက်စပ်သက်သေသာ CMNI-46 အကြေးခွံမူလတန်းဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းတွင်ထည့်သွင်းခဲ့ကြသည်။
ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ရိုးရာပုလ်အခန်းကဏ္ norm စံများ၊ မိမိကိုယ်ကိုလေးစားမှုနှင့်ပြpornနာဆိုင်ရာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ကိုက်ညီမှုအကြားဆက်နွယ်မှုကိုဆန်းစစ်ရန်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာညီမျှခြင်းပုံစံ (SEM) ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ SEM (Kline, 2016) အတွက်အကောင်းဆုံးသောအလေ့အကျင့်အကြံပေးချက်များအရကျွန်ုပ်တို့သည်လက်ငင်းရှိနေသော variable များအားလုံးနှင့်သက်ဆိုင်သောထင်ရှားသည့်အချက်များ (ကန့်သတ်ချက်တစ်ခုချင်းစီကိုစကေးတစ်ခုချင်းစီ၏အခြေခံပစ္စည်းများမှဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြစ်သည်) တွင်ကွဲလွဲမှုများကိုလုံလောက်စွာရှင်းပြရန်သေချာစေရန်တိုင်းတာခြင်းပုံစံကိုကျွန်ုပ်တို့ပထမဆုံးစမ်းသပ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းတာခြင်းပုံစံကိုအကဲဖြတ်ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တို့သည်အခြေခံအဆောက်အ ဦး ပုံစံကိုဆန်းစစ်ခဲ့ပြီး၎င်းသည်ရိုးရာပုလ်အခန်းကဏ္ norm စံနှုန်းများနှင့်ကိုက်ညီမှုနှင့်မိမိကိုယ်ကိုလေးစားမှုပြproblemနာသည်ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနယ်ပယ်များတွင်ထူးခြားသောကှဲလှဲကိုခန့်မှန်းခဲ့သည်။ ထို့အပြင်၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ရှုခြင်းကြိမ်နှုန်း (ဥပမာ Borgogna & McDermott, 2018) နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်မှု (ဥပမာ၊ Hald, Smolenski, & Rosser, 2014) ကိုပြသခြင်းသည်ပြuseနာဆိုင်ရာအသုံးအနှုန်းများနှင့်သက်ဆိုင်သောအရေးကြီးသောပြောင်းလဲနိုင်သောအရာများဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကြည့်ရှုသည့်ကြိမ်နှုန်းကိုထိန်းချုပ်သည်။ အားလုံးမူလတန်းဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းအတွက် (heterosexual = 0, GBQ = 1 အမိန့် binary variable ကိုအဖြစ်ခွဲခြား) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်။
တစ် ဦး တည်းဖြတ်သူအဖြစ် Self- လေးစားမှု၏အခန်းကဏ္assessကိုအကဲဖြတ်ရန်ကျနော်တို့ထို့နောက် MPLUS (Klein & Moosbrugger, 2000) တွင် XWITH command ကိုအသုံးပြု။ ငုပ်လျှိုးနေ moderated ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာညီမျှခြင်းနည်းလမ်းကိုအသုံးပြု။ ငုပ်လျှိုးနေ variable ကို interaction ကစမ်းသပ်စစ်ဆေးပါတယ်။ အထူးသဖြင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံပုံစံတွင်မိမိကိုယ်ကိုလေးစားမှုနှင့်ပုဂ်္ဂိုလ်အဆင့်တစ်ခုအကြားအပြန်အလှန်အသုံးအနှုန်းများပါ ၀ င်သည့် post-hoc မော်ဒယ်များကိုကျွန်ုပ်တို့ဖန်တီးခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ထို့နောက် PPUS အတိုင်းအတာအပေါ် CMNI-46 အချက်များအကြားလမ်းကြောင်းမြင့်မားသော (ယုတ်အထက် 1 SD က) နှင့် Self- လေးစားမှု၏အနိမ့် (ယုတ်အောက်တွင် 1 SD က) မှာလေ့လာခဲ့ကြရသောရိုးရှင်းသောတောင်စောင်း, အကဲဖြတ်။ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာပုံစံတွင်တိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုထိန်းချုပ်ရာတွင်အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ခုစီကိုပြုလုပ်ခဲ့သည် (အပြာစာကြည့်ခြင်းအပြာစာပေရုပ်ပုံများနှင့်မိမိကိုယ်ကိုလေးစားမှုအပါအ ၀ င်) ။ မျိုးစုံအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည့်မော်ဒယ်များကိုစမ်းသပ်ခြင်းများရှိသော်လည်း (ပုဂ်္ဂိုလ်တစ်ခုစီအတွက်သီးခြားအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်) ကျွန်ုပ်တို့သည် alpha level ကိုထိန်းသိမ်းထားသည်။ p <.05 စာရင်းအင်းအရေးပါမှုကိုအဆုံးအဖြတ်ဘို့ငါတို့အဆင့်အဖြစ်။ အထူးသဖြင့်ငုပ်လျှိုးနေသော variable များ၏အခြေအနေတွင်အပြန်အလှန်သက်ရောက်မှုများကိုသဘာဝအားဖြင့်ရှားပါးသည်။ ပြုပြင်ထားသောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံပုံစံ၏အယူအဆဆိုင်ရာပုံကိုပုံ ၁ တွင်ဖော်ပြထားသည်။
မော်ဒယ် - မသင့်လျော်မှုကိုအကဲဖြတ်ရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အောက်ပါမတူညီသောညွှန်းကိန်းများနှင့်အကြံပြုမှုဖြတ်တောက်ခြင်းများကိုအသုံးပြုခဲ့သည် (Hu & Bentler, 1999; Kline, 2016): နှိုင်းယှဉ်သောမထိုက်မတန်အညွှန်းကိန်း (CFI) နှင့် Tucker-Lewis အညွှန်းကိန်း (TLI; .95 နှင့်နီးစပ်သောတန်ဖိုးများသည်ကောင်းမွန်သောအချက်ကိုညွှန်ပြသည်) CFI နှင့် TLI နှစ်ခုလုံးအတွက်သင့်လျော်သည်။ အကြမ်းဖျင်းခန့်မှန်းချက်၏အမြစ် - စတုရန်းအမှား (RMSEA) နှင့် ၉၀% ယုံကြည်မှုကြားကာလများ (CIs; .90 နိမ့်သောတန်ဖိုးများနှင့် .06 ထက်နည်းသောမြင့်မားသောတန်ဖိုးများသည်ကောင်းမွန်သောမသင့်လျော်ကြောင်းဖော်ပြသည်) နှင့်နှင့် စံစံအမြစ် - ယုတ် - စတုရန်းကျန် (SRMR; .10 သို့မဟုတ်ထိုထက်နည်း၏တန်ဖိုးများကိုတစ် ဦး ကောင်းမထိုက်မတန်ညွှန်ပြ) ။ chi-square စမ်းသပ်စာရင်းအင်းကိုလည်းတင်ပြခဲ့သည်။ သို့သော်နမူနာအရွယ်အစား (Kline, 08) နှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ငုပ်လျှိုးနေ variable ကို interaction ကများအတွက်အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်ကိုအောက်ပါကျနော်တို့အပြန်အလှန်အသုံးအနှုန်းများမပါဘဲတိုင်းတာခြင်းနှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံမော်ဒယ်များ၏မထိုက်မတန်အကဲဖြတ်။
အမျိုးသား ၅၂၀ တွင်အနည်းငယ်သည်ပျောက်ဆုံးနေသောတန်ဖိုးများကိုပိုင်ဆိုင်ထားကြသည် (မည်သည့်အခွဲခွဲများအတွက်မဆိုနမူနာ၏ ၀.၃၃% ထက်မပို) ။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပျောက်သောတုံ့ပြန်မှုများကိုကိုင်တွယ်ရန်သတင်းအချက်အလက်အပြည့်အဝဖြစ်နိုင်ခြေကိုခန့်မှန်းခဲ့သည်။ CMNI-520 အားလုံးနှင့် Self-esteem ရမှတ်များသာမကကြိမ်နှုန်းကိုကြည့်ရှုသည့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများပုံမှန်အားဖြန့်ဝေခဲ့သည်။ အနည်းငယ်သောအပြုသဘော skew (PPP) အချက်များအားလုံးတွင်ထင်ရှားသည် (၁.၀၇ မှ ၁.၆၇ အထိ) ။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောပုံမှန်ချိုးဖောက်မှုများကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားနေစဉ်မော်ဒယ်နှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေရန်ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကဆန်းစစ်ခြင်းများတွင်ခိုင်မာသည့်စံမှားယွင်းမှုများ (MLR) ဖြင့်အများဆုံးဖြစ်နိုင်ခြေကိုခန့်မှန်းခဲ့သည်။ အနည်းငယ် (<0.03%) multivariate ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး Mahalanobis အကွာအဝေးကနေတဆင့်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်, ဒါပေမယ့်သူတို့ရဲ့သေးငယ်တဲ့ကြိမ်နှုန်းပေးထားဖယ်ရှားပစ်မခံခဲ့ရ ဇယား 46 သည် bivariate ဆက်နွယ်မှုများ၊ နည်းလမ်းများနှင့်တိုင်းတာမှုတစ်ခု၏စံသွေဖီမှုများကိုပြသသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် PPUS ၏အနည်းဆုံးရှုထောင့်တစ်ခုနှင့်သိသာထင်ရှားသော bivariate ဆက်နွယ်မှုကိုပြသရန်အမျိုးသမီးများ၊ playboy၊ အနိုင်ရခြင်း၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိန်းချုပ်မှုနှင့်မိမိကိုယ်ကိုအားကိုးခြင်းတို့သည်တစ်ခုတည်းသောအကြေးခွံများဖြစ်သောကြောင့်၎င်းတို့သည်နောက်ဆက်တွဲဆန်းစစ်လေ့လာမှုများတွင်တစ်ခုတည်းသောအကြေးများဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် PPUS အချက်များနှင့်အလွန်သေးငယ်သော၊ သိသာထင်ရှားသောမဟုတ်သောဆက်စပ်မှုများကြောင့်အကြမ်းဖက်မှုကိုတိုင်းတာသည့်ပုလ်စံသတ်မှတ်ချက်များမပါ ၀ င်ပါ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပဏာမဆန်းစစ်ခြင်းအပြီးတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်သတ်မှတ်ထားသော SEM တိုင်းတာခြင်းနှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာပုံစံများကိုစမ်းသပ်ခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း Mplus ဗားရှင်း 7.31 (Muthén & Muthén, 2016) တွင်ကောက်ယူခဲ့သည်။ သီးခြားပစ္စည်းများကိုသက်ဆိုင်ရာလျှို့ဝှက်ကိန်းရှင်များကိုအသုံးပြုသည်။ စစ်ဆေးမှုအားလုံးကို (bootstraps မှအပ) MLR ကို အသုံးပြု၍ ခန့်မှန်းခဲ့သည်။ အဆိုပါတိုင်းတာခြင်းမော်ဒယ်တစ် ဦး လက်ခံနိုင်ဖွယ်မထိုက်မတန်ပေး,n = 520) χ2 (989) = 1723.24, p <.001, CFI = .94, TLI = .93, RMSEA = .038 (90% CI = .035, .041), နှင့် SRMR = .047 ။ အချက်အလက်များတင်ခြင်းကိုအွန်လိုင်းဖြည့်စွက်ဇယား ၁ တွင်ဖော်ပြထားသည်။ ထို့နောက် CMNI-1 သည်အမျိုးသမီးများအပေါ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှု၊ မိမိကိုယ်ကိုအားကိုးမှု၊ အနိုင်ရမှု၊ ကစားနိုင်မှုနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိန်းချုပ်မှုအပြင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားမှုနှင့် covariates များကိုဖော်ပြထားသောဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာပုံစံကိုလေ့လာခဲ့သည်။ အပြာကြည့်ရှုသည့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်မှုတို့သည် PPUS နှင့်အတူခန့်မှန်းသူအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားသည်။ အလုပ်လုပ်သည့်ပြproblemsနာများ၊ အလွန်အကျွံအသုံးပြုခြင်း၊ ထိန်းချုပ်မှုအခက်အခဲများနှင့်အနိမ့်ဆုံးစိတ်ခံစားမှုများကိုစံသတ်မှတ်ချက်များအဖြစ်ပြောင်းလဲသည်။
ကနဦးတည်ဆောက်ပုံမော်ဒယ်တစ်ဦးလက်ခံနိုင်ဖွယ်မထိုက်မတန်ပေး, χ2 (1063) = 2185.65, p <.001, CFI = .92, TLI = .92, RMSEA = .045 (90% CI = .042, .048), နှင့် SRMR = .047 ။ bootstrap နမူနာများ (n = 1000) ထို့နောက် PPUS subscales ဖို့ခန့်မှန်း variable ကိုတစ်ခုချင်းစီမှလမ်းကြောင်း၏ယုံကြည်မှုကြားကာလကိုခန့်မှန်းရန်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ စားပွဲတင်3တစ်ဦးချင်းစီလမ်းကြောင်းကိုများအတွက် unstandardized နှင့်စံချိန်စံညွှန်းမီကိန်းများနှင့် 95% ယုံကြည်မှုကြားကာလဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ရလဒ်များအများအပြားသိသိသာသာလမ်းကြောင်းညွှန်ပြ။ အထူးသ, အမျိုးသမီးများအပေါ်ပါဝါအလုပ်လုပ်တဲ့ပြဿနာများ, အလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်း, ထိန်းချုပ်ခြင်းအခက်အခဲများနှင့်အပျက်သဘောဆောင်သောစိတ်ခံစားမှုများရှောင်ရှားခြင်းဟောကိန်းထုတ်; ပလေးဘွိုင်အလွန်အကျွံအသုံးပြုခြင်းကိုဟောကိန်းထုတ်; အနိုင်ရတဲ့အဆိုး functional ဖြစ်စေပြဿနာတွေနဲ့အနုတ်လက္ခဏာစိတ်ခံစားမှုများရှောင်ရှားခြင်းဟောကိန်းထုတ်; စိတ်ခံစားမှုကိုထိန်းချုပ်အဆိုးအလုပ်လုပ်တဲ့ပြဿနာများ, အလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်း, ထိန်းချုပ်ခြင်းအခက်အခဲများနှင့်အပျက်သဘောဆောင်သောစိတ်ခံစားမှုများရှောင်ရှားခြင်းဟောကိန်းထုတ်; နှင့် Self-လေးစားမှုအဆိုးအပျက်သဘောဆောင်သောစိတ်ခံစားမှုများရှောင်ရှားခြင်းခန့်မှန်းခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါအခြေခံအဆောက်အဦးပုံစံအလုပ်လုပ်တဲ့ပြဿနာများများအတွက်ကှဲလှဲ၏ 12%, အလွန်အကျွံအသုံးပြုမှုအတွက် 26%, 22% ကိုထိန်းချုပ်အခက်အခဲများနှင့်အပျက်သဘောဆောင်သောစိတ်ခံစားမှုများရှောင်ရှားခြင်းအဘို့အ 33% အဘို့မှတ်။
moderation ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း။ ပြဿနာညစ်ညမ်းကြည့်ရှုအပေါ်စံချိန်စံညွှန်းများနှင့် Self-လေးစားမှု masculine မှညီညွတ်မှု၏အလားအလာအပြန်အလှန်ဆန်းစစ်ရန်, အပြန်အလှန်အသုံးအနှုန်းများအတိုင်းအတာကြည့်ရှုပြဿနာညစ်ညမ်းကြိုတင်ခန့်မှန်းဖို့အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ interaction ကသီးခြားစီထုတ်ပေးခဲ့ကြသည်။ ထို့အပြင်လမ်းခရီးဘို့အထိန်းချုပ်ထားတစ်ဦးချင်းစီအပြန်အလှန်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံမော်ဒယ် (စားပွဲတင် 3) တွင်ထုတ်လုပ်ပြီး။ ရလဒ်များသိသိသာသာအပြန်အလှန်သက်ရောက်မှုညွှန်ပြ။ အထူးသစိတ်ခံစားမှုကိုထိန်းချုပ် X ကို Self-လေးစားမှု၏အပြန်အလှန်သက်တမ်း (functional ဖြစ်စေပြဿနာများဟောကိန်းထုတ်B = .16, အရှေ့တောင် = .07, β = .11, p = .01) နှင့်ထိန်းချုပ်မှုအခက်အခဲများ (B = .18, အရှေ့တောင် = .07, β = .11, p = .02); ပလေးဘွိုင် X ကို Self-လေးစားမှုအနုတ်လက္ခဏာ (အလွန်အကျွံအသုံးပြုခြင်းကိုခန့်မှန်းB = -.16, အရှေ့တောင် = .06, β = -.15, p = .01) နှင့်အပျက်သဘောစိတ်ခံစားမှုများရှောင်ရှားခြင်း (B = -.24, အရှေ့တောင် = .07, β = -.16, p <.001); နှင့် Self- မှီခို X ကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားအလုပ်လုပ်တဲ့ပြproblemsနာများကိုခန့်မှန်း (B = .14, အရှေ့တောင် = .07, β = .10, p = .02) ။ တစ်ခုချင်းစီကိုဆင်ခြေလျှော -2 (အနိမ့်မှာသုညထက်သိသိသာသာကြီးလျှင်3နှင့် 1 ယင်းကြံစည်မှုဖြည့်ညှင်းသက်ရောက်မှုကိုဖော်ပြရန်နှင့်ဆုံးဖြတ်ရန်ရိုးရှင်းသောတောင်စောင်းစမ်းသပ်မှု၏ရလဒ်များကိုများကိုကိန်းဂဏန်းများSD) နှင့်မြင့်မားသော (+ 1SDSelf-လေးစားမှု၏) အဆင့်ဆင့်။ စုစုပေါင်းအဲဒီဖြည့်ညှင်းသက်ရောက်မှုအနုတ်လက္ခဏာစိတ်ခံစားမှုများရှောင်ရှားခြင်းအဘို့အကာအပိုဆောင်းအလုပ်လုပ်တဲ့ပြဿနာများအတွက် 2% ကိုထိန်းချုပ်အခက်အခဲများအတွက် 2%, အလွန်အကျွံအသုံးပြုမှုအတွက် 5% နှင့် 5% များအတွက်စာရင်းကိုင်, တိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှု ကျော်လွန်. ကြည့်ရှုပြဿနာညစ်ညမ်းအတွက်ကှဲလှဲရှင်းပြသည်။
ဒါ့အပြင် Self-လေးစားမှု၏အခန်းကဏ္ဍကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားနေချိန်တွင်ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှု, ပြဿနာညစ်ညမ်းကြည့်ရှုအပေါ်ရိုးရာပုလ်အခန်းကဏ္ဍစံချိန်စံညွှန်းမှယောက်ျားရဲ့ညီညွတ်မှု၏ပေါင်းစပ်ပံ့ပိုးမှုများကိုဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ တိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှုအပြင်, Self-လေးစားမှုအလားအလာက Moderator အဖြစ်လေ့လာခဲ့သည်။ နှစျခုယူဆချက်ချီတက်ခဲ့ကြသည်: (H1) အမြိုးသမီးမြားကိုကျော်အာဏာပလေးဘွိုင်, အကြမ်းဖက်မှုနှင့်စိတ်ခံစားမှုကိုထိန်းချုပ်စံချိန်စံညွှန်းပြဿနာကြည့် domains များ၏အပြုသဘောဆောင်သည့်ခန့်မှန်းဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ခဲ့ကြ, (H2) Self-တန်ဖိုးထားသောဤအသင်းအဖွဲ့များအိပ်ရေးဝြခင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ပိုမိုဆိုးရွားလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ခဲ့သည်နေစဉ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များကိုယေဘုယျအားဖြင့် (သို့သော်မပေးလုံးဝ) ကြှနျုပျတို့၏ယူဆချက်ထောက်ခံခဲ့ကြသည်။
အယူအဆတစ်ခုနှင့်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုက်ညီမှု၊ အမျိုးသမီးများအပေါ်အာဏာနှင့်ပလေးဘွိုင်ပုလ်အခန်းကဏ္ norm စံနှုန်းများသည်အနည်းဆုံးပြproblemနာရှိသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုသည့်နေရာတွင် bivariate အဆင့်နှင့်သိသိသာသာဆက်စပ်နေသော်လည်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိန်းချုပ်မှုမှာပြaticနာအပြာစာပေရုပ်ပုံကြည့်ရှုသည့်ရှုထောင့်များနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ စိတ်ဝင်စားစရာမှာအကြမ်းဖက်မှုစံနှုန်းများသည်ပြpornနာရှိသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ရှုသည့်အချက်များနှင့်ဆက်စပ်မှုမရှိပါ။ ထို့အပြင်အပြန်အလှန်ဆက်စပ်မှုအညွှန်းကိန်းမှရလဒ်များသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ရှုခြင်းနှင့်သိသိသာသာဆက်နွယ်မှုရှိရန်မိမိကိုယ်ကိုအားကိုးခြင်းနှင့်အနိုင်ရစံနှုန်းများကိုပြသသည် (သိသိသာသာအပျက်သဘောဆက်စပ်မှုအဖြစ်အနိုင်ရခြင်း၊ မိမိကိုယ်ကိုအားကိုးခြင်းသိသိသာသာအပြုသဘောဆက်နွယ်မှု) ဖြစ်သည်။ ဤတွေ့ရှိချက်များအရအမျိုးသားများ၏ရိုးရာပုလ်အခန်းကဏ္ norm စံများနှင့်ကိုက်ညီမှု (Hammer, Heath, & Vogel, 2018) ၏ဘက်ပေါင်းစုံသဘောသဘာဝကိုမီးမောင်းထိုးပြပြီးအချို့အခန်းကဏ္ norm စံများသည်အခြားသူများထက်ပြpornနာအပြာစာပေရုပ်ပုံကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ပိုမိုသက်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ ထို့အပြင်ဤစံနှုန်း (၅) ခု၏ပေါင်းစပ်ထည့် ၀ င်မှုများကိုထိန်းချုပ်သောအခါ၊ မိမိကိုယ်ကိုလေးစားမှု၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်မှုနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြည့်ရှုခြင်းအကြိမ်ရေ၊ အမျိုးသမီးများအပေါ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှု၊ ကစားသမား၊ အနိုင်ရခြင်းနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိန်းချုပ်မှုတို့ကထူးခြားသောကှဲလှဲမှုကိုတိုက်ရိုက်ကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုဖြင့်ရှင်းလင်းစွာမခန့်မှန်းနိုင်ပါ။ ဤထင်ရှားသောတိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှုများအနက်အမျိုးသမီးများအပေါ်အာဏာသည်တစ်ခုတည်းသောအရာဖြစ်သည် အပြုသဘောဆောင် အဘို့ခန့်မှန်း အားလုံး ပြဿနာညစ်ညမ်းကြည့်ရှု၏ domains များ, စိတ်ခံစားမှုကိုထိန်းချုပ်နေတဲ့တသမတ်တည်းခဲ့သော်လည်း အနုတ် အဘို့ခန့်မှန်း အားလုံး ဒိုမိန်းများ။
စိတ်ခံစားမှုထိန်းချုပ်မှု၏အခန်းကဏ္specificallyကိုအထူးသဖြင့်ဆန်းစစ်သောအခါ၊ အားနည်းသောစိတ်ခံစားမှုများကိုအမျိုးသားများအားမည်သို့ဖော်ပြသင့်သည်ဟူသောယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာမျှော်လင့်ချက်များသည်သက်ဆိုင်ကောင်းရှိနိုင်သည်။ ၎င်းတို့၏စိတ်ခံစားမှုများကိုထိန်းချုပ်ရန်ကြိုးပမ်းနေသူများသည်ယေဘုယျသတိမထားမိခြင်း (သို့) သူတို့၏အပျက်သဘောဆောင်သောစိတ်ခံစားမှုအခြေအနေကိုဖော်ပြရန်အခက်အခဲများကိုအစီရင်ခံလေ့ရှိသည် (Levant, Wong, Karakis, & Welsh, 2015; Wong, Pituch, & Rochlen, 2006) ။ ထို့ကြောင့်သူတို့၏စိတ်ခံစားမှုအခြေအနေကိုသတိမပြုမိသောအမျိုးသားများသည်အပျက်သဘောဆောင်သောစိတ်ခံစားမှုများကိုစီမံရန်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများကိုထောက်ခံမှုနည်းပါးနိုင်သည် (ဥပမာ - ၀ မ်းနည်းခြင်းနှင့် ၀ မ်းနည်းခြင်း; Kor et al ။ , 2014) ။ ထို့အပြင်ယောက်ျား၏စိတ်ခံစားမှုဖော်ပြချက်နှင့် ပတ်သက်၍ လူ့အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာမျှော်လင့်ချက်များနှင့်အညီချုပ်တည်းခြင်းမှချုပ်တည်းထားသောအရည်အသွေးများကိုတီထွင်ခဲ့ကြသောအမျိုးသားများသည်အပျက်သဘောခံစားချက်များကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမပြုရန်သင်ယူခြင်းကြောင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုအသုံးပြုခြင်းအားအစီရင်ခံရန်နည်းပါးနိုင်သည်။ ၎င်းတို့၏စိတ်ခံစားမှုများကိုထိန်းချုပ်ရန်ကြိုးစားသူအမျိုးသားများသည်ချုပ်တည်းမှုလိုအပ်သောစိတ်ခံစားမှုများကိုမည်သို့ဖော်ပြရမည်ကိုယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာမျှော်လင့်ချက်များသို့ ၀ ယ်ခြင်း၏ဘေးထွက်ပစ္စည်းတစ်ခုအဖြစ်ဖြစ်နိုင်သည်။ (Fox & Calkins, 2003) မကြာခဏအနုတ်လက္ခဏာရလဒ်များနှင့်ဆက်စပ်နေစဉ် (။ McDermott et al, 2017; Wong et al, 2017 ။ ), စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိန်းချုပ်မှုနှင့်ဆက်စပ် Self- ထိန်းချုပ်မှုပြproblemနာညစ်ညမ်းကြည့်ရှုစပ်လျဉ်းအပြုသဘောအကျိုးကျေးဇူးများကိုလိုက်လျောလိမ့်မည်။ ဥပမာ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိန်းချုပ်မှုပိုကောင်းသောယောက်ျားများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုနေဆဲဖြစ်သော်လည်းပြitနာဖြစ်လာသည့်အထိမကြည့်ရှုနိုင်ပါ။ အခြားအပြaticနာအပြုအမူဆိုင်ရာယခင်သုတေသနပြုမှုကထိုကဲ့သို့သောဆက်ဆံရေးကိုထောက်ခံသည်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိန်းချုပ်မှုသည်အပျက်သဘောဖြင့်ကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်ခြင်း (Iwamoto, Corbin, Lejuez, & MacPherson, 2015) ။
စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာထိန်းချုပ်မှု၏ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်မတူဘဲ၊ ပလေးဘွိုင်နှင့်အမျိုးသမီးစံနှုန်းများအပေါ်အာဏာသည်ပြproblemနာဆိုင်ရာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြည့်ရှုခြင်းနှင့်အပြုသဘောဆက်နွယ်မှုရှိသည်။ Playboy စံနှုန်းများသည်အလွန်အကျွံအသုံးပြုမှုပြproblemsနာများနှင့်ကျိုးနွံစွာဆက်နွယ်နေသော်လည်း၊ အတိုင်းအတာတစ်ခုလုံးတွင်ကြည့်ရှုနေသည့်ပြproblemနာအပြာစာပေရုပ်ပုံများကြည့်ရှုခြင်းကိုအမျိုးသမီးများအပေါ်အာဏာသည်အဘယ်ကြောင့် ပို၍ တသမတ်တည်း (နှင့်ပိုမိုအားကောင်းသည့်) ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်ဖြစ်ကြောင်းယုတ္တိကျသောမေးခွန်းတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာသည်။ ယခင်သုတေသန (Mikorski & Szymanski, 2017) တွင်အကြိမ်ရေကိုကြည့်နေသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ။ ဆောက်လုပ်ရေးကွာခြားချက်များတွင်အရေးကြီးသောခြားနားချက်ကိုတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကြိုတင်လေ့လာမှုများသည်အမျိုးသားများ၏ပုဂ်္ဂိုလ်စံသတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီမှုကိုအဓိကထားသောကြောင့် ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုကြိမ်နှုန်း မည့်အစား ပြဿနာညစ်ညမ်းကြည့်ရှု။ ထို့ကြောင့်အမျိုးသမီးများသည်ယုံကြည်ချက်တွေနဲ့အပြုအမူတွေအပေါ်အာဏာနှင့်အတူထူးခြားတဲ့အသင်းအဖွဲ့များရှိစေခြင်းငှါ ပြဿနာများ ညစ်ညမ်းနှင့်ဆက်နွယ်။ ဤသည်ပြဿနာများနှင့်ဆက်စပ်သောခံအဖြစ်ယောက်ျားရဲ့အစဉ်အလာပုလ်ကြီးစိုးအယူဝါဒကိုညွှန်းအမျိုးသားတျေ-အဟောင်းနှင့်ခေတ်သစ် sexism (Smiler, 2006) ၏အများဆုံးတသမတ်တည်း (နှင့်အပြင်းထန်ဆုံး) Correlate အဖြစ်မကြာသေးမီကသုတေသနပြုအဖြစ်အမျိုးသမီးကျော်အာဏာကိုညွှန်ပြကြောင်းယခင်လေ့လာမှုများနှင့်အတူတသမတ်တည်းဖြစ်တယ် ညစ်ညမ်း (Borgogna, McDermott အညိုရောင်, et al ။ , 2018) ကြည့်ရှု။ အတူ တဦးတည်းဖြစ်နိုင်ခြေကရှာနေချုပ်ကိုင်နိုင်သောအမြိုးသမီးမြားကသူတို့ကိုခွင့်ပြုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဘဝအတွက်အမျိုးသမီးတွေအပေါ်အာဏာနှင့်ထိန်းချုပ်မှုရှာသောယောက်ျားအထူးသဖြင့်ညစ်ညမ်းစေရန်ရေးဆွဲစေခြင်းငှါဖြစ်ပါသည်။ အကျိုးဆက်အဖြစ်, နှင့်ဖြစ်နိုင်သည်ကြောင့်ယေဘုယျအားဖြင့်ကြည့်ရှုညစ်ညမ်း၏စွဲလမ်းဝိသေသလက္ခဏာများမှ (cf, Gola et al ။ , 2017), ဒီလူ Kor et al (မိမိတို့၏ညစ်ညမ်းကြည့်အလေ့အထများနှင့်ဆက်စပ်, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် relational ပြဿနာများကိုဖွံ့ဖြိုးစေနိုင်သည်။ , 2014) ။
စိတ်ဝင်စားစရာ, အကြမ်းဖက်မှုစံချိန်စံညွှန်းမှညီညွတ်မှုပင် bivariate အဆင့်မှာ, အတိုင်းအတာကြည့်ရှုမည်သည့်ပြဿနာညစ်ညမ်းမှဆက်စပ်မဟုတ်ခဲ့ပေ။ သို့သော်ညစ်ညမ်းကြည့်ရှု အကြိမ်ရေ ကြိုးနှံစှာအကြမ်းဖက်မှုများဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ကဒီကိုလည်းညစ်ညမ်းကြည့်ရှုအကြားအပြုသဘောဆောင်တဲ့အတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုတစ်ရောင်ပြန်ဟပ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်ယုံကြည် ပြဿနာ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြည့်ရှုခြင်း။ စာပေမြောက်မြားစွာကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခြင်းအားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်ဆက်စပ်သောအကြောင်းအချက်အဖြစ်ဖော်ထုတ်ခဲ့သည် (ဥပမာ Hald et al ။ , 2010; Vega & Malamuth, 2007) ။ သို့သော်ဤတွေ့ရှိချက်များကသူတို့၏ကြည့်ရှုခြင်းကိုပြproblemနာဟုယူမှတ်ခြင်းရှိမရှိထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းမရှိပါ။ နောက်ထပ်လေ့လာမှုပြုလုပ်ရန်အလားအလာရှိသောနယ်ပယ်တစ်ခုမှာပုလ်စံနှုန်းများနှင့်စပ်လျဉ်း။ စိတ်ပညာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစရိုက်လက္ခဏာများကိုစစ်ဆေးခြင်းနှင့်ပြproblemနာရှိသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြည့်ရှုခြင်း။ နောက်ကွယ်တွင်လူမှုရေးဆန့်ကျင်ရေးကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးဝိသေသလက္ခဏာများရှိသူတို့သည်လိင်ဆိုင်ရာရန်လိုသည့်အပြုအမူများနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြည့်ရှုခြင်းကိုပိုမိုများပြားစွာပြသနိုင်မည်ဖြစ်သော်လည်းသူတို့၏ကြည့်ရှုခြင်းကိုပြproblemနာအဖြစ်ရှုမြင်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
အနိုင်ရစံနှုန်းများသည်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာပုံစံတွင်ပြproblemနာရှိသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ရှုခြင်းနှင့်သိသိသာသာဆက်နွယ်သောတစ်ခုတည်းသောမျှော်လင့်ချက်ကင်းမဲ့သောပုလ်မျက်နှာဖုံးဖြစ်သည်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိန်းချုပ်မှုနည်းတူအနိုင်ရခြင်းသည်အကျင့်ဆိုးပြfunctionalနာများနှင့်အပျက်သဘောခံစားချက်များကိုရှောင်ရှားရန်အတွက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောပြissuesနာများနှင့်လည်းအပျက်သဘောဆောင်သည်။ အနိုင်ရခြင်းနှင့်ပြproblemနာဆိုင်ရာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြည့်ရှုခြင်းအကြားအပျက်သဘောဆက်စပ်မှုသည်ဆောက်လုပ်ရေးနှစ်ခုကိုဆက်သွယ်ထားသောသုတေသနရှားပါးမှုနှင့်အတော်လေးဝေးလံသောအယူအဆဆိုင်ရာဆက်သွယ်မှုများကြောင့်အတော်လေးအံ့အားသင့်စရာဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင်ဤတွေ့ရှိချက်များသည်အထွေထွေအခိုင်အမာနှင့်ကိုက်ညီပြီးပုလ်အခန်းကဏ္ norm စံနှုန်းများနှင့်ကိုက်ညီမှုသည်တစ်ခါတစ်ရံတွင်အကျိုးရှိသောဆက်နွယ်မှုများရှိနိုင်သည် (Hammer & Good, 2010) ။ အမှန်စင်စစ်အနိုင်ရခြင်းကိုတန်ဖိုးထားလေးစားကြသောအမျိုးသားများသည်အပြုသဘောဆောင်သော၊ အထူးအခွင့်အရေးရှိသောကိုယ်ပိုင်အမြင်ရှိခြင်းကြောင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကဲ့သို့သောကျန်းမာရေးနှင့်မညီညွတ်သည့်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနည်းများနှင့်ရုန်းကန်ရန်အလားအလာနည်းပါးသည်။ အလားတူစွာအနိုင်ရခြင်းကိုတန်ဖိုးထားသောအမျိုးသားများသည်သူတို့၏အလုပ်အကိုင်များဖြစ်သောသူတို့၏ကြိုးပမ်းမှုတွင်အဆင့်အတန်းကိုမှီဝဲဖွယ်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းတို့သည်ဤအခြေအနေနှင့်ဆက်နွယ်သောဆက်ဆံရေးများ (အလုပ်၊ အချစ်ဇာတ်လမ်းများ) ကိုတန်ဖိုးထားသောကြောင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုမသင့်လျော်သောအခြေအနေများတွင်အသုံးပြုရန်နည်းပါးနိုင်သည်။
တနည်းအားဖြင့် "ဆုရရှိသူ," အဖြစ်မိမိတို့ကိုယ်ကိုရိပ်မိသို့မဟုတ်အဖြစ်မိမိတို့ကိုယ်ကိုရိပ်မိချင်သောသူတို့အား "ဆုရရှိသူ" မိမိတို့၏ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုပြဿနာကြောင်းကိုရိပ်မိ (သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးစစ်တမ်းများအပေါ်ကိုတုံ့ပြန်) ကိုလျော့နည်းဖွယ်ရှိဖြစ်နိုင်သည်။ လူမှုရေးကဤအချက်များပေါ်တွင်တည်ရှိစေခြင်းငှါလိုလားဘက်လိုက်မှုအဖြစ်ယေဘုယျအားဖြင့် CMNI-46 နှင့် PPUS အချက်များပေးထားအနာဂတ်သုတေသီများသည်ဤအချက်များဆန်းစစ်၏ဝတ္ထုနည်းလမ်းများကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ အရည်အသွေးသုတေသနပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုရန်ပံ့ပိုးစေခြင်းငှါပုလ်ဝိသေသလက္ခဏာများအမျိုးအစားများကိုနားလည်ရန်အထူးအထောက်အကူဖြစ်နိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဒုတိယယူဆချက်နှင့်အညီ၊ မြင့်မားသောမိမိကိုယ်ကိုလေးစားမှုသည်တိကျသောစံနှုန်းများနှင့်ကိုက်ညီခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်ဆက်စပ်သောပြproblemsနာများအကြားဆက်နွယ်မှုကိုယုတ်လျော့စေခဲ့သည်။ စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသည်မှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိန်းချုပ်မှုစံနှုန်းများသည်ပြlowနာဆိုင်ရာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ရှုခြင်း၏သိသိသာသာအပြုသဘောဆောင်သည့်ခန့်မှန်းချက်များဖြစ်လာသည်။ Playboy စံချိန်စံညွှန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ သိသာထင်ရှားသည့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုများရှိခဲ့သည်။ Playboy စံသတ်မှတ်ချက်ကိုလိုက်နာခြင်းနှင့်မိမိကိုယ်ကိုလေးစားမှုနိမ့်ခြင်းသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအလွန်အကျွံအသုံးပြုခြင်းနှင့်အပျက်သဘောဆောင်သောစိတ်ခံစားမှုများကိုစီမံရန်အတွက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းပြasနာများအတွက်အရေးကြီးသောအချက်တစ်ချက်ဖြစ်သည်။ ပစ္စုပ္ပန်တွေ့ရှိချက်များကပျက်စီးလွယ်သောပုလ်ကိုမိမိကိုယ်မိမိနှင့်မရေရာမသေချာသောလူများအားအာရုံစိုက်ခြင်း (Blazina, 2001; Burkley et al ။ , 2016; Vandello & Bosson, 2013) သည်လက်တွေ့အခြေအနေများတွင်အထူးသဖြင့်သက်ဆိုင်နိုင်သည်၊ တ ဦး တည်းရဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလေးစားမှု၏ valence ။
အတိတ်ကသုတေသနပြုချက်များအရသူတို့၏ပုလ်များအားခြိမ်းခြောက်မှုကိုသိသောအမျိုးသားများသည်ပုလ်အပြုအမှုများကိုအလွန်အမင်းလုပ်ဆောင်လေ့ရှိကြောင်းပြသခဲ့သည် (Vandello & Bosson, 2013); ထို့ကြောင့်မိမိကိုယ်ကိုလေးစားမှုနိမ့်ကျသောအမျိုးသားများသည်မိမိကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားခြင်း (ပုလ် - ဆက်နွယ်မှု) ကိုခံစားရနိုင်သည် (Burkley et al ။ 2016) ။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှခြွင်းချက်မရှိ, အပျက်သဘော Self- အမြင်များနှင့်အတူယောက်ျားလိင်ကျူးကျော်မှတဆင့်သူတို့ရဲ့မလုံခြုံမှုကိုလျော့ပါးစေရန်နည်းလမ်းအဖြစ်, ကစားသမားစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အလွန် overforming လိမ့်မည် အပြန်အလှန်အားဖြင့်ဤမလုံခြုံသောအမျိုးသားများသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုအတွက်သာမကသူတို့၏လူကြိုက်များမှုကိုသက်သေပြရန်အတွက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုအထူးစွဲမှတ်စေနိုင်သည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်၊ အပြုသဘောဆောင်သောမိမိကိုယ်ကိုအမြင်များရှိသောအမျိုးသားများသည်တူညီသောလုံခြုံမှုကင်းမဲ့နေနိုင်သည့်အတွက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ရှုရန်လိုအပ်သည်။ မိမိကိုယ်ကိုလေးစားမှုမြင့်မားသောအမျိုးသားများသည်မိမိကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပုဂ်္ဂိုလ်အပေါ်အလေးအနက်ထားပြောဆိုခြင်းမရှိသောကြောင့်သူတို့၏ပုလ်အခန်းကဏ္ norm စံသတ်မှတ်ချက်နှင့်ညီညွတ်မှုသည်အချို့သောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြည့်ရှုခြင်းနှင့်မသက်ဆိုင်ပါ။ ထို့အပြင်မြင့်မားသောကိုယ့်ကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားလေးစားသောအမျိုးသားများသည်ပုလ်၏ရိုးရာအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်များနှင့်တွေ့ဆုံပြီးဖြစ်သော (သို့မဟုတ်သူတို့တွေ့ခဲ့ပြီဟုထင်မြင်မိခြင်း) သည်သူတို့၏ပုလ်သက်သေကိုပြရန်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုရန်လိုအပ်သည်ဟုမခံစားရပေ။ ဥပမာအားဖြင့်, ကစားသမားစံချိန်စံညွှန်းကိုထောက်ခံသူတစ် ဦး သည်သူသည်အရည်အချင်းပြည့်ဝသူဖြစ်ပြီးမိမိကိုနှစ်သက်သောကြောင့်သူနှင့်လိင်ဆက်ဆံသူအရေအတွက်၊
ယောက်ျားရဲ့အပုလ်မခိုင်မြဲဆန်းစစ်ကိုလည်းဆိုသော်ငြားအနည်းငယ်ကွဲပြားခြားနားသောဦးတည်ချက်၌, Self-မှီခို interaction ကနားလည်သဘောပေါက်ဘို့ဂတိတော်ကိုကိုင်လိမ့်မည်။ နှစ်ဦးစလုံး Self-အားကိုးနဲ့စိတ်ခံစားမှုကိုထိန်းချုပ်စံချိန်စံညွှန်းနှင့် ပတ်သက်. ညစ်ညမ်းကြည့်နဲ့ဆက်စပ်ပြဿနာများ; Self-လေးစားမှု၏အနိမ့်အဆင့်ဆင့်နှင့်အတူယောက်ျားအများဆုံးအလုပ်လုပ်တဲ့ (။ Kor et al, 2014 ဥပမာ relational, အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ) သက်သေ။ စိတ်ဝင်စားစရာ Self-မှီခိုတှငျလညျးမွငျ့မားခဲ့ကြသူအ Self-လေးစားမှုအတွက်မြင့်မားသောသူတို့က, Self-လေးစားမှုအတွက်အနိမ့်သောသူတို့အားတစ်ခုတူညီမှုနှုန်းမှာအလုပ်လုပ်တဲ့ပြဿနာများကိုပြ။ ထို့ကြောင့် Self-လေးစားမှု၏ကြားခံအကျိုးသက်ရောက်မှုမြင့်မား Self-မှီခိုဖြစ်ခြင်းအစီရင်ခံသောသူတို့အဘို့ပျောက်ကွယ်သွားသည်။
စိတ်ခံစားမှုကိုထိန်းချုပ်နှင့်ပြဿနာညစ်ညမ်းကြည့်ရှုအကြားဆက်ဆံရေးကအနုတ်ကျန်ရစ်နေစဉ်, ဒါကြောင့်အနိမ့် Self-လေးစားမှုနှင့်အတူသူတို့အဘို့ဝေးပိုဆိုးခဲ့ပါတယ်။ မကြာမီကသုတေသနကြည့်ရှုပြဿနာညစ်ညမ်းနှင့်ဆက်စပ်သောခံအဖြစ်ယောက်ျားရဲ့တင်းကျပ်စိတ်ခံစားမှုအယူဝါဒထဲထားပြီး (et al Borgogna, McDermott အညိုရောင်, 2018 ။ ); ထိုသို့ထိုကဲ့သို့သောအယူဝါဒ၏အမူအကျင့်ပေါ်ထွန်းခြင်း Self-လေးစားမှု၏အလယ်အလတ်အခန်းကဏ္ဍများအတွက်ထိန်းချုပ်ရန်ပင်အခါ, အနုတ်လက္ခဏာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်စိတ်ခံစားမှုကိုထိန်းချုပ်နှင့် တွဲဖက်. အတွက်ဖြစ်နိုင်သမျှ Self-ထိန်းချုပ်မှုအချက်များအတွက်အငြင်းအခုံခိုင်မာစေ။ အမှန်စင်စစ်ကွဲပြားခြားနားမှုလည်းအမှန်တကယ်စိတ်ခံစားမှုကိုထိန်းချုပ်အပြုအမူတွေမှတင်းကျပ်စိတ်ခံစားမှုအယူဝါဒနှင့်ကိုက်ညီအကြားတည်ရှိနေ။ (; et al, Borgogna, McDermott အညိုရောင်, 2018 အထူးသဖြင့်အခက်အခဲများနှင့်အပျက်သဘောဆောင်သောစိတ်ခံစားမှုများရှောင်ရှားခြင်းကိုထိန်းချုပ်။ ) ယောက်ျားစိတ်ခံစားမှုအသုံးအနှုန်းတွေနှိမ်ရမည်ဟုအဆိုပါယုံကြည်ချက်ပြဿနာညစ်ညမ်းကြည့်အပြုအမူတွေနှင့်ဆက်စပ်သောခံရဖို့ပုံရသည်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိန်းချုပ်မှုစနစ်တစ်ခုမှညီညွတ်မှုသွားရမည်အကြောင်း (ဖွယ်ရှိ Self-ထိန်းချုပ်မှုမှတဆင့်ကမကထပြုခဲ့သော်လည်း) အမှန်တကယ်အကာအကွယ်ဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော် longitudinal သုတေသနပိုပြီးနီးနီးကပ်ကပ်သည်ဤ variable တွေကို၏ယာယီဆက်ဆံရေးဆန်းစစ်ဖို့စဉ်းစားရပါမည်။
ပစ္စုပ္ပန်တွေ့ရှိချက်အများအပြား key ကိုကန့်သတ်နိုင်ဖို့လေးစားမှုနှင့်အတူအနက်ရပါမည်။ အထူးသ, အ Cross-Section သဘာဝနှင့်ဆက်စပ်မှုဒီဇိုင်းကိုကြောင်းကျိုးဆက်စပ်သို့မဟုတ်အခန်းကဏ္ဍစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ပြဿနာညစ်ညမ်းကြည့် masculine မှညီညွတ်မှု၏စစ်မှန်တဲ့ယာယီအမိန့်နှင့် ပတ်သက်. မည်သည့်ကုမ္ပဏီတခုကောက်ချက်ထပ်မံလုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိပါ။ longitudinal သုတေသနကဤကန့်သတ်ဖြေရှင်းရန်လိုအပ်ပါသည်။ နမူနာလည်းအဆင်ပြေ၏တဦးတည်းကြီးနှင့်အသက်အရွယ်နှင့်ပြိုင်ပွဲမှာမတူကွဲပြားမှုတွေမရှိခဲ့ပေ။ ပုလ်အခန်းကဏ္ဍစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အသက်အရွယ်အလိုက်ဖြတ်ပြီးအင်တာနက် differential ကိုအသုံးပြုမှုများ၏ယဉ်ကျေးမှု-defined သဘာဝပေးထားသောပိုသုတေသနအရောင်၏ယောက်ျားနှင့်သက်တမ်းတစ်လျှောက်ပစ္စုပ္ပန် variable တွေကိုဆန်းစစ်ဖို့လိုတယျ။ ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုလည်းလူမှုရေးအရနှစ်လိုဖွယ်တုန့်ပြန်ဘက်လိုက်မှုသို့မဟုတ်အခြားယိုယွင်းနေလွှမ်းမိုးမှုမှဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါပြီရသော Self-အစီရင်ခံစာအစီအမံအပေါ်မှီခို။ ထို့ကြောင့်သုတေသီများကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေ့ရှိချက်ပုံတူပွားခြင်းနှင့်တိုးချဲ့ဖို့မိတ်ဖက်အစီရင်ခံစာသို့မဟုတ်အခြားစူးစမ်းနည်းလမ်းများဆန်းစစ်ဖို့တိုက်တွန်းပါသည်။ သုတေသီများကလည်းဤအချက်အလက်ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုကနေပျက်ကွက်ခဲ့ပေမယ့်တစ်ဦးအလားအလာ covariate အဖြစ်ထည့်သွင်းရန်အသုံးဝင်ပါပြီစေခြင်းငှါမစဉ်းစား, ပုံမှန်အားကြည့်ရှုအားပေးညစ်ညမ်း၏မျိုးအကြောင်းကိုပိုမို In-depth ကိုလူဦးရေအချိုးအစားသတင်းအချက်အလက်များစုဆောင်းရန်တိုက်တွန်းပါသည်။
ဤအတွေ့ရှိချက်အပိုဆောင်းနမူနာများတွင်စမ်းသပ်ပြီးကြပြီမဟုတ်ပေးထားသည့်ရလဒ်များပွားလိုအပ်ပေသည်။ အမှန်မှာထိုအခြေခံအဆောက်အဦးပုံစံအတွက်သိသာထင်ရှားသောလမ်းကြောင်းနှစ်ခုဟာ unstandardized ကိန်း (အလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်းတစ်ဦးခန့်မှန်းအဖြစ်အပျက်သဘောဆောင်သောစိတ်ခံစားမှုများနှင့်ပလေးဘွိုင်၏ရှောင်ရှားခြင်းတစ်ဦးခန့်မှန်းအဖြစ်အနိုင်ရ) ၏ထက်ဝက်အရွယ်အစားဖြစ်ကြောင်းစံအမှားအယွင်းများရှိခဲ့သည်။ Self-လေးစားမှုနှင့်အတူအပြန်အလှန်ပလေးဘွိုင်များနှင့်အလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်းတို့အကြားဆက်ဆံရေးအချို့တွက်သည်။ သို့သော်ကအနိုင်ဂိုးများနှင့်ပြဿနာညစ်ညမ်းအတိုင်းအတာအကြားဆက်ဆံရေးကိုအတည်ပြုနောက်ထပ်သုတေသန, ကြောင့်လက်ရှိမော်ဒယ်အတွက်လမ်းကြောင်း၏တည်ငြိမ်မှုကိုကျော်အလားအလာဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များမှအကြံပြုသည်။
ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘာသာရေးအကြောင်းအချက်များ၊ အကျင့်ယိုယွင်းမှုသို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြည့်ရှုခြင်းသည်ကိုယ်ကျင့်တရားနှင့်မကိုက်ညီသော (နှင့်ထို့ကြောင့်ပြproblemနာ) အတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုများကိုလုံလောက်စွာမထိန်းချုပ်နိုင်ပါ။ သုတေသနကြွယ်ဝသောအဖွဲ့ကပြသနာများသည်ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြည့်ရှုခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်ကြောင်းပြသခဲ့သည် (Borgogna & McDermott, 2018; Grubbs, Exline, et al ။ , 2015; Grubbs & Perry, 2018; Grubbs, Perry, et al ။ , 2018; Grubbs, Wilt, et al, 2018; ။ နယ်လ်ဆင်, Padilla-Walker က, & ကာရိုး, 2010; ။ Wilt et al, 2016) ထို့ကြောင့်အနာဂတ်လေ့လာမှုများတွင်ဘာသာရေးနှင့်ကိုယ်ကျင့်တရားမညီညွတ်ခြင်းတို့သည်ပုလ်နှင့်ဆက်စပ်သောအချက်များနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်စပ်မှုရှိမရှိကိုဆန်းစစ်ရန်အနာဂတ်သုတေသီများအားကျွန်ုပ်တို့တိုက်တွန်းပါသည်။ အလားတူပင်လိင်စိတ်တိမ်းညွတ်မှုကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ထိန်းချုပ်ထားသော်လည်းမကြာသေးမီကသုတေသနပြုချက်များအရစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလူနည်းစုလက္ခဏာများ (Borgogna, McDermott, Aita, & Kridel, 2018) တွင်သိသိသာသာကွာခြားကြောင်းဖော်ပြသည်။ တိကျသော ဦး တည်ရာများကို ဖြတ်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ယူဆချက်ကိုစမ်းသပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့တွင်လုံလောက်သောနမူနာမရှိခဲ့ပါ။ ထို့ကြောင့်အနာဂတ်သုတေသီများသည်၎င်းကိုအနာဂတ်လေ့လာမှုအတွက်အရေးပါသောနည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်သင့်သည်။
ဆုတ်ခွာခြင်းနှင့်သည်းခံမှုနှင့်အတူအလားအလာပြဿနာများအတွက်အကောင့်ကြည့်ရှုပြဿနာညစ်ညမ်း၏နောက်ဆုံးတွင်အခြားရွေးချယ်စရာအစီအမံ။ ထိုကဲ့သို့သောအကြောင်းအချက်များသေချာပေါက်အားလုံးတစ်ဦးချင်းစီအနေနဲ့ပြဿနာမဟုတ်နေစဉ်, သူတို့ဆက်ဆက်ညစ်ညမ်းစွဲ (ရိပ်မိညစ်ညမ်းစွဲ cf, Grubbs et al ဆန့်ကျင်။ , 2015, 2017) နဲ့ရုန်းကန်နေရသူတို့အဘို့အကြောင်းခံအချက်များရှိပါသည်။ အဆိုပါပြဿနာညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစားသုံးမှုစကေး (နှစ်ဦးစလုံး et al ။ , 2018) ဤရှုထောင့်မှဝင်ရောက်ခွင့်ကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်းအသစ်တခုအတိုင်းအတာဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိလေ့လာမှုကောက်ယူခံရသောအခါကံမကောင်းစွာပဲအတိုင်းအတာမရရှိသေးမဟုတ်ခဲ့ပေ။ သို့သော်အနာဂတ်သုတေသီများကထောက်ပံ့နောက်ထပ်ရှုထောင်၏အကျိုးကျေးဇူးကိုစဉ်းစားသင့်ပါတယ်။
အချို့သောအကန့်အသတ်ရှိသော်လည်းလက်ရှိတွေ့ရှိချက်များသည်အရေးကြီးသောလက်တွေ့သက်ရောက်မှုများရှိသည်။ ပြproblemနာရှိသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ရှုခြင်းအတွက်ကုသမှုသည်အများအားဖြင့်အစပိုင်းတွင်ရှိသည်။ Sniewski, Farvid နှင့် Carter (၂၀၁၈) သည်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအမျိုးသားများအားပြographyနာအလျောက်ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုမှုကိုအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်ကုသမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သုတေသနပြန်လည်သုံးသပ်ချက်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးလေ့လာမှု ၁၁ ခုကိုသာတွေ့ရှိနိုင်ပြီးအများစုမှာဖြစ်ရပ်မှန်လေ့လာမှုများဖြစ်သည်။ သို့သော်ပိုမိုကြီးမားသောစမ်းသပ်မှုအနည်းငယ်ကိုသတိပြုမိခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့်သိမြင်မှုအပြုအမူကုသမှုကုထုံး (CBT) (Hardy, Ruchty, Hull, & Hyde, 2018; Young, 11) နှင့်လက်ခံခြင်းနှင့်ကတိကဝတ်ပြုခြင်းကုထုံး (ACT) (Crosby & Twohig, 2010; Twohig & Crosby, 2007) သည်အထူးသဖြင့် ညစ်ညမ်းစာပေနှင့်ဆိုင်သောပြproblemsနာများနှင့်ရုန်းကန်နေရသူတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်ကုသမှုအဖြစ်ရလဒ်များ။
ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်အထီး client များပါဝင်သည်ပုလ်-related အချက်များတို့အားဤသို့သောအကုသပြွီးမှအကျိုးစေခြင်းငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။ အထူးသ, တိုင်ပင်မှူးမတ်ပုလ်အခန်းကဏ္ဍစံချိန်စံညွှန်းမှညီညွတ်မှုသူတို့ရဲ့ client ကိုရဲ့အဆင့်ကိုအကဲဖြတ်ရန်နှင့်ထိုကဲ့သို့သောညီညွတ်မှုနှင့် ပတ်သက်. အပြုသဘောနှင့်အပျက်သဘောအကျိုးဆက်များစူးစမ်းလေ့လာနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုအချို့စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ပြဿနာညစ်ညမ်းအကြားအပြုသဘောဆောင်သည့်အသင်းအဖွဲ့များပေးထား, တိုင်ပင်မှူးမတ်သူတို့ရဲ့ clients များနှင့်အတူပုလ်စူးစမ်းခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းပုလ်သူတို့ရဲ့အသုံးအနှုန်းတွေမှချည်ထားသောစေခြင်းငှါဘယ်လိုဆွေးနွေးရန်နိုင်ဘူး။ အမြိုးသမီးမြားကိုကျော်ပါဝါပြဿနာညစ်ညမ်းကြည့်ရှု၏အရှိဆုံးတသမတ်တည်းခန့်မှန်းခဲ့ကြောင်းထည့်သွင်းစဉ်းစား, Clinician ညစ်ညမ်းမှယောက်ျားရဲ့ဆွဲဆောင်မှုအတွက်ကြီးစိုးနှင့်အာဏာ themes များရှာဖွေစူးစမ်းထည့်သွင်းစဉ်းစားလိမ့်မည်။ အမြိုးသမီးမြားကိုထိန်းချုပ်ရန်ယောက်ျားရဲ့အလိုဆန္ဒများ၏ဇစ်မြစ်နှင့် function ကိုဖော်ထုတ်ခြင်းညစ်ညမ်းကြည့်ရှု၏အလားအလာ antecedents ၏အရေးကြီးသော Self-အသိအမြင်ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်။
ပစ္စုပ္ပန်တွေ့ရှိချက်များကအကြံပြုထားသကဲ့သို့, သူတို့ရဲ့ပုလ်အတွက်မလုံခြုံဟုခံစားရသူကိုယောက်ျားညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုတစ်ဦး core ကို Self-လေးစားမှုလိုအပ်ကြောင်းဖြည့်ဆည်းခြင်းငှါဖြစ်နိုင်သည်ကြောင့်၎င်း, ၎င်းတို့၏ညစ်ညမ်းကြည့်နှင့်အတူရုန်းကန်ဖို့အများဆုံးဖွယ်ရှိဖြစ်နိုင်သည်။ Self-လေးစားမှုများအတွက်ကုထုံးကြားဝင်ဖြေရှင်းသုတေသနများ၏ကြံ့ခိုင်စုဆောင်းမှုပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုလျှော့ချရန်မည်သို့မည်ပုံအတွက်အများကြီးလိုအပ်ဦးတည်ချက်ပေးနိုင်ဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့၏သုတေသနကုသ client ကို Self-လေးစားမှုတိုးတက်စေရန်နိုင်ကြသည်မှန်လျှင်, ညစ်ညမ်း၏ညစ်ညမ်းနှင့် / သို့မဟုတ်အမှန်တကယ်အသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်သောစိုးရိမ်ပူပန်မှုများကျဆင်းစေခြင်းငှါအကြံပြုထားသည်။ ထို့ကြောင့် Self-လေးစားမှုတိုးပွားလာနေတဲ့လူကို internalized ကြစေခြင်းငှါအစဉ်အလာပုလ်အခန်းကဏ္ဍစံချိန်စံညွှန်းအချို့ကိုတန်ပြန်နိုင်ရန်ကူညီနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဒါဟာအစကသူတို့ကိုထိုအဖိအားတန်ပြန်သူတို့နေသောနှင့်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအဖြစ်နှင့်တစ်ဦးသောသူကဲ့သို့သူတို့အမျှော်လင့်ထားသည့်ဘာကိုရည်မှတ်ကျန်းမာအမြင်များ၏သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အထောက်အကူပြုနိုင်ရန်ကူညီလိမ့်မည်။
ပြpornနာဆိုင်ရာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ရှုခြင်းသည်ကြီးထွားလာနေသောလက်တွေ့ပြconcernနာဖြစ်သည် (Sniewski et al ။ , 2018) ။ ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများကြည့်ရှုနိုင်မှု၊ တတ်နိုင်မှုနှင့်အမည်ဝှက်ခြင်းကိုကြည့်ရှုရန်လွယ်ကူသောကြောင့် (Cooper, 1998; Cooper, Delmonico, & Burg, 2000) ပြproblemနာရှိသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြည့်ရှုခြင်းသည်အထူးသဖြင့်အမျိုးသားများအတွက်ဆက်လက်ပြန့်နှံ့သွားနိုင်သည်။ လက်ရှိလေ့လာမှုအရလူမှုရေးအရတည်ဆောက်ထားသောပုလ်ကျားမအခန်းကဏ္ norm သည်ပြpornနာရှိသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြည့်ရှုခြင်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုသြဇာသက်ရောက်နိုင်သည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ တွေ့ရှိချက်များကလည်းပုလ်နှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြည့်ရှုခြင်းအကြားဆက်နွယ်မှုသည်ရှုပ်ထွေးကြောင်းဖော်ပြသည်။ မိမိကိုယ်ကိုလေးစားမှုနိမ့်ကျသောအမျိုးသားများသည်၎င်းတို့၏အပြာစာပေရုပ်ပုံများကြည့်ခြင်းသည်ပုလ်ဖော်ပြခြင်းသို့မဟုတ်ဖျော်ဖြေခြင်းနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ အတူတူယူ, ဤတွေ့ရှိချက်ယဉ်ကျေးမှု၏လမ်းဆုံများနှင့်တစ် ဦး ချင်းကွဲပြားမှုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်သူတို့ရဲ့ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောယောက်ျား၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှင့် relational ပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းသုတေသန, သီအိုရီနှင့်လက်တွေ့အလေ့အကျင့်များအတွက်အထူးသဖြင့်အရေးကြီးသောဖြစ်အံ့သောငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။
မစ္စအောလ်ဘရိုက်, JM (2008) ။ အွန်လိုင်း America မှာလိင်: အင်တာနက်လိင်ရှာနှင့်၎င်း၏သက်ရောက်မှုရှိလိင်၏တူးဖော်ရေး, အိမ်ထောင်ရေးအခြေအနေနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာ။ လိင်သုတေသနဂျာနယ်, 45, 175-186 ။ https://doi.org/10.1080/00224490801987481
Alexandraki, K. , Stavropoulos, V. , Burleigh, TL, King, DL, & Griffiths, MD (2018) ။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်းကိုဆယ်ကျော်သက်အရွယ်အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုအတွက်အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အပြုအမူစွဲ၏ဂျာနယ်, 7, 423-432 ။ https://doi.org/10.1556/2006.7.2018.34
Bergner, RM, & Bridges, AJ (2002) ။ ရင်ခုန်စရာမိတ်ဖက်များအတွက်မိုးသည်းထန်စွာညစ်ညမ်းပါဝင်ပတ်သက်မှု၏အရေးပါမှု: သုတေသနနှင့်လက်တွေ့သက်ရောက်မှု။ လိင် & အိမ်ထောင်ရေးကုထုံး၏ဂျာနယ်, 28, 193-206 ။ https://doi.org/https://doi.org/10.1080/009262302760328235
Blazina, C. (2001) ။ analytic စိတ်ပညာနှင့်ကျားမအခန်းကဏ္ဍပဋိပက္ခ: ပျက်စီးလွယ်သောပုလ်မိမိကိုယ်ကို၏ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ။ Psychotherapy: သီအိုရီ, သုတေသန, အလေ့အကျင့်, လေ့ကျင့်ရေး, 38, 50–59. https://doi.org/10.1037/0033-3204.38.1.50
Borgogna, NC, & McDermott, RC (2018) ။ ပြgenderနာရှိသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ရှုခြင်းတွင်ကျား၊ မအတွေ့အကြုံမှရှောင်ရှားနိုင်မှု၊ လိင်စွဲခြင်းနှင့်ထိုးဖောက်ခြင်း။ https://doi.org/10.1080/10720162.2018.1503123
Borgogna, NC, McDermott, RC, Aita, SL, & Kridel, MM (2018) ။ ကျား၊ မနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလူနည်းစုများအကြားစိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်စိတ်ဓာတ်ကျမှု - လိင်ကွဲပြားမှုအပေါ်သက်ရောက်မှုများ၊ ကျားမခွဲခြားမှုမရှိခြင်း၊ လိင်တူဆက်ဆံခြင်း၊ လိင်ကွဲပြားမှု၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရှေ့တိုင်းဆန်နှင့်ကျားမတူကွဲပြားခြင်း၏စိတ်ပညာ။ https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1037/sgd0000306
Borgogna, မြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနား, McDermott, RC, Brown, BR, Beach, JD, & Aita, SL (2018) ။ ရိုးရာပုလ်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမတို့ပြproblemနာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ခြင်းနှင့်မည်သို့ဆက်စပ်သနည်း။ လိင်အခန်းကဏ္ဍ. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s11199-018-0967-8
Bőthe, ခ, Tóth-Király, ဗြဲ, Zsila, Á။ , Griffiths က, MD, Demetrovics, Z. , & Orosz, G. အ (2018) ။ ပြtheနာဆိုင်ရာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှုပမာဏ (PPCS) ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု။ လိင်သုတေသနဂျာနယ်, 55, 395-406 ။ https://doi.org/10.1080/00224499.2017.1291798
Brem, MJ, Garner, AR, Grigorian, H. , Florimbio, AR, Wolford-Clevenger, C, Shorey, RC, & Stuart, GL (2018) ။ ပြereနာရှိသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်းနှင့်ရိုက်နှက်ခံရသူများ၏ ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းအစီအစဉ်များတွင်ယောက်ျားများအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရင်းနှီးသောမိတ်ဖက်အကြမ်းဖက်မှုကျူးလွန်ခြင်း။ Interpersonal အကြမ်းဖက်မှုဂျာနယ်, 088626051881280 ။ https://doi.org/10.1177/0886260518812806
Bridges, AJ, Bergner, RM, & Hesson-McInnis, M. (2003) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကို Romantic မိတ်ဖက်များအသုံးပြုခြင်း - ၎င်းသည်အမျိုးသမီးများအတွက်အရေးပါသည်။ လိင် & အိမ်ထောင်ရေးကုထုံး၏ဂျာနယ်, 29, 1-14 ။ https://doi.org/10.1080/00926230390154790
တံတားများ, AJ, Sun, CF, Ezzell, MB, & ဂျွန်ဆင်, ဂျေ (2016) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကိုအသုံးပြုသောယောက်ျားနှင့်မိန်းမတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ script များနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ။ လိင်၊ မီဒီယာ၊ နှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်း, 2, 1-14 ။ https://doi.org/10.1177/2374623816668275
Bridges, AJ, Wosnitzer, R. , Scharrer, အီး, Sun, C, & Liberman, R. (2010) ။ ရောင်းအားအကောင်းဆုံးညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများမှလိင်မှုဆိုင်ရာအမူအကျင့်များ - အကြောင်းအရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအသစ်အဆန်း။ အမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုဆိုင်ရာ, 16, 1065-1085 ။ https://doi.org/10.1177/1077801210382866
Burkley, အမ်, Wong, YJ, & ဘဲလ်, AC အ (2016) ။ အဆိုပါ Masculinity အရေးပေါ်စကေး (MCS): စကေးဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများ။ ယောက်ျားနှင့်ပုလ်၏စိတ်ပညာ, 17, 113-125 ။ https://doi.org/10.1037/a0039211
ကာရိုး, JS, Busby, DM, Willoughby, BJ, & ဘရောင်း, CC ကို (2017) ။ ညစ်ညမ်းသောကွာဟချက် - ယောက်ျားနှင့်မိန်းမတို့၏အပြာစာပေရုပ်ပုံများကွာခြားမှုများ။ စုံတွဲ & ဆက်ဆံရေးကုထုံး၏ဂျာနယ်, 16, 146-163 ။ https://doi.org/https://doi.org/10.1080/15332691.2016.1238796
ကာရိုးလ်၊ JS၊ Padilla-Walker, LM, Nelson, LJ, Olson, CD, Barry, CM, & Madsen, SD (2008) ။ ထွန်းသစ်စအရွယ်ရောက်သူများအကြားမျိုးဆက် XXX အပြာစာပေရုပ်ပုံများလက်ခံသည် ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်သုတေသနဂျာနယ်, 23, 6-30 ။ https://doi.org/https://doi.org/10.1177/0743558407306348
Cooper က, အေ (1998) ။ လိင်နှင့်အင်တာနက်: သစ်ကိုထောင်စုနှစ်သို့ surfing ။ Cyberpsychology & အပြုအမူ, 1, 187-193 ။ https://doi.org/doi:10.1089/cpb.1998.1.187 ။
Cooper က, အေ, Delmonico, DL, & Burg, R. (2000) ။ Cybersex အသုံးပြုသူများ၊ အလွဲသုံးစားပြုသူများ၊ လိင်စွဲခြင်းနှင့်ထိုးဖောက်ခြင်း, 7, 5-29 ။ https://doi.org/10.1080/10720160008400205
Cortoni, အက်ဖ်, & မာရှယ်, WL (2001) ။ လိင်ကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသည့်နည်းဗျူဟာနှင့်၎င်းသည်ငယ်ရွယ်သောလိင်ဆိုင်ရာသမိုင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုကျူးလွန်သူများ၏ရင်းနှီးမှုနှင့်ဆက်ဆံရေး။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးမှု: သုတေသနနှင့်ကုသရေး၏ဂျာနယ်, 13, 27-43 ။ http://sax.sagepub.com.excelsior.sdstate.edu/content/13/1/27.full.pdf+html မှရယူရန်?
Crosby, JM, & Twohig, အမတ် (2016) ။ ပြproblemနာရှိသောအင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုအတွက်လက်ခံခြင်းနှင့်ကတိကဝတ်ပြုခြင်းကုထုံး - ကျပန်းကျပန်းစမ်းသပ်ခြင်း။ အပြုအမူကုထုံး, 47, 355-366 ။ https://doi.org/10.1016/j.beth.2016.02.001
ထမင်းစားခန်း, G. အ (2006) ။ အဖြူရောင်လူသားရဲ့ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး: Gonzo ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်အနက်ရောင်ပုလ်၏ဆောက်လုပ်ရေး။ ဥပဒေနှင့်အမျိုးသမီးတိုက်ပွဲယေးလ်ဂျာနယ်, 18, 293–297. https://doi.org/http://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/yjfem18&div=15&g_sent=1&casa_token=SrIfkdoYlYgAAAAA:XHjdxQcCU0yw8jHmairxly_uYIkv-IBTYscED10VqFE0kC9ulkcIjLi9X5zE7CrDcEOW9G91&collection=journals
Fischer, AR (2007) ။ မိဘကြားဆက်ဆံရေးအရည်အသွေးနှင့်လုလင်တို့အတွက်ပုလ်ကျား-အခန်းကဏ္ဍ strain: ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး၏ဖြန်ဖြေဆိုးကျိုးများ။ ဆုံးမစကားစိတ်ပညာရှင်, 35, 328-358 ။ https://doi.org/10.1177/0011000005283394
Fox က, NA, & ​​Calkins, SD က (2003) ။ စိတ်ခံစားမှု၏ချုပ်တည်းမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု - အတွင်းပိုင်းနှင့်ပြင်ပလွှမ်းမိုးမှုများ။ Motivation and Emotion, 27, 7-26 ။ https://doi.org/10.1023/A:1023622324898
Fritz, N. , & ပေါလု, ခ (2017) ။ အော်ဂဇင်မှသည်ရိုက်တာသို့ကူးပြောင်းခြင်း - အမျိုးသမီးများအတွက်၊ အမျိုးသမီးများအတွက်နှင့်ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ script များကို objectify နှင့် objectifying ၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။ လိင်အခန်းကဏ္ဍ, 77, 639–652. https://doi.org/10.1007/s11199-017-0759-6
Gola, အမ်, Lewczuk, K. , & Skorko, အမ် (2016) ။ အဘယ်အရာကအရေးကြီးသနည်း - ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေပမာဏ၏အရည်အသွေးသို့မဟုတ်အရည်အသွေးကဘာလဲ။ ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်းအတွက်ကုသမှုရှာဖွေရန်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာအချက်များ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာဂျာနယ်, 13, 815-824 ။ https://doi.org/10.1016/j.jsxm.2016.02.169
Gola, အမ်, Wordecha, အမ်, Sescousse, G. အ, Lew-Starowicz, အမ်, Kossowski, ခ, Wypych, အမ် ... Marchewka, အေ (2017) ။ ညစ်ညမ်းစွဲလမ်းဖြစ်နိုင်သလား? ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအတွက်ကုသမှုရှာကြံယောက်ျားတစ်ဦး fMRI လေ့လာမှု။ Neuropsychopharmacology, 42, 2021-2031 ။ https://doi.org/10.1038/npp.2017.78
Grubbs, JB, Exline, JJ, Pargament, KI, Hook, JN, & Carlisle, RD (2015) ။ စွဲလမ်းမှုအဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်း - ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုစွဲလမ်းမှု၏ခန့်မှန်းချက်အနေဖြင့်ဘာသာရေးနှင့်ကိုယ်ကျင့်တရားပျက်ပြားမှု။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း, 44, 125–136. https://doi.org/10.1007/s10508-013-0257-z
Grubbs, JB, & Perry, SL (2018) ။ ကိုယ်ကျင့်တရားပျက်ပြားခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်း - ဝေဖန်ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်ပေါင်းစည်းခြင်း။ လိင်သုတေသနဂျာနယ်, 1-9 ။ https://doi.org/10.1080/00224499.2018.1427204
Grubbs, JB, ပယ်ရီ, SL, Wilt, JA, & ရိဒ်, RC (2018) ။ ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာမကိုက်ညီမှုကြောင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေပြproblemsနာများ - စနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့် meta-analysis ဖြင့်ပေါင်းစပ်ထားသောပုံစံ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း။ https://doi.org/10.1007/s10508-018-1248-x
Grubbs, JB, Sessoms, J. , Wheeler, DM, & Volk, အက်ဖ် (2010) ။ ဆိုက်ဘာညစ်ညမ်းစာပေအသုံးပြုမှုစာရင်း - အကဲဖြတ်ချက်အသစ်တစ်ခုတည်ဆောက်ခြင်း။ လိင်စွဲခြင်းနှင့်ထိုးဖောက်ခြင်း, 17, 106-126 ။ https://doi.org/10.1080/10720161003776166
Grubbs, JB, Wilt, JA, Exline, JJ, Pargament, KI, & Kraus, SW (2018) ။ ကိုယ်ကျင့်တရားပျက်ပြားခြင်းနှင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲစွဲစွဲလမ်းမှု - လောင်ဂျီတွဒ်စစ်ဆေးခြင်း။ စှဲမွဲမှု, 113, 496-506 ။ https://doi.org/10.1111/add.14007
Hald, GM, Malamuth, NM, & Yuen, C. (2010) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်အမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုကိုထောက်ခံသည့်သဘောထားများ - အတွေ့အကြုံမရှိသောလေ့လာမှုများမှဆက်ဆံရေးကိုပြန်လည်လေ့လာခြင်း။ ရန်လိုမူအကျင့်, 36, 14-20 ။ https://doi.org/10.1002/ab.20328
Hald, GM, & Malamuth, NN (2015) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ထိတွေ့မှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း, 44, 99–109. https://doi.org/10.1007/s10508-014-0291-5
Hald, GM က, Smolenski, D. , & Rosser, BRS (2014) ။ အမျိုးသားများနှင့်လိင်ဆက်ဆံသောယောက်ျားများအကြားလိင်ဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောမီဒီယာများ၏ရိပ်မိအကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှုအကျိုးသက်ရောက်မှုပမာဏ (PCES) ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများဖြစ်သည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာဂျာနယ်, 10, 757–767. https://doi.org/10.1111/j.1743-6109.2012.02988.x.Perceived
Hammer, JH, & Good, GE (2010) ။ အပြုသဘောစိတ်ပညာ: ပုလ်စံချိန်စံညွှန်းများထောက်ခံချက်၏အကျိုးရှိသောရှုထောင့်တစ်ခုပင်ကိုယ်မူလစာမေးပွဲ။ အမျိုးသားများနှင့် Masculinity ၏စိတ်ပညာ, 11, 303-318 ။ https://doi.org/10.1037/a0019056
Hammer, JH, Heath, PJ, & Vogel, DL (2018) ။ စုစုပေါင်းရမှတ်၏ကံကြမ္မာ: Masculine စံချိန်စံညွှန်း - 46 (CMNI-46) မှလိုက်နာမှု၏အရွယ်အစား။ အမျိုးသားများနှင့် Masculinity ၏စိတ်ပညာ။ https://doi.org/10.1037/men0000147
Hardy, SA, Ruchty, ဂျေ, Hull, TD, & Hyde, R. (2010) ။ hypersexuality များအတွက်အွန်လိုင်း psychoeducational အစီအစဉ်၏တစ် ဦး ကပဏာမလေ့လာမှု။ လိင်စွဲလမ်းနှင့် compulsive, 17, 247-269 ။ https://doi.org/10.1080/10720162.2010.533999
Heath, PJ, Brenner, RE, Vogel, DL, Lannin, DG, & Strass, HA (2017) ။ ပုလ်နှင့်အကြံပေးခြင်းရှာခြင်းအတွက်အတားအဆီးများ - မိမိကိုယ်ကိုသနားခြင်း၏ကြားခံအခန်းကဏ္ role ။ တိုင်ပင်စိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်, 64, 94-103 ။ https://doi.org/10.1037/cou0000185
ဟူ, အယ်လ်, & Bentler, pm တွင် (1999) ။ covariance ဖွဲ့စည်းပုံခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအတွက်မထိုက်မတန်အညွှန်းကိန်းများအတွက် Cutoff စံ: အသစ်ကအခြားနည်းလမ်းနှိုင်းယှဉ်သမားရိုးကျစံ။ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံညီမျှခြင်းမော်ဒယ်လင်း, 6, 1-55 ။ https://doi.org/https://doi.org/10.1080/10705519909540118
Iwamoto, DK, Corbin, ဒဗလျူ, Lejuez, C တို့, & MacPherson, အယ်လ် (2015) ။ ကောလိပ်အမျိုးသားများနှင့်အရက်သုံးစွဲခြင်း - ပုံမှန်ပုလင်းစံသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အရက်သုံးစွဲမှုကြားတွင်ဖျော်ဖြေမှုအနေဖြင့်အပြုသဘောဆောင်သောအရက်သုံးစွဲမှု။ ယောက်ျားနှင့်ပုလ်၏စိတ်ပညာ, 15, 29-39 ။ https://doi.org/10.1037/a0031594.College
Kalman, တီ (2008) ။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းနှင့်အတူလက်တွေ့တွေ့ဆုံ။ အဆိုပါ Psychoanalysis ၏အမေရိကန်အကယ်ဒမီနှင့် Dynamic စိတ်ရောဂါကုသမှု၏ဂျာနယ်, 36, 593-618 ။ https://doi.org/https://doi.org/10.1521/jaap.2008.36.4.593
Klaassen, MJE, & ပေတရု, ဂျေ (2015) ။ ကျား၊ မရေးရာအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုဆိုင်ရာတန်းတူညီမျှမှု။ လိင်သုတေသနဂျာနယ်, 52, 721-735 ။ https://doi.org/10.1080/00224499.2014.976781
Klein, အေ, & Moosbrugger, အိပ်ချ် (2000) ။ LMS နည်းလမ်းနှင့်ငုပ်လျှိုးနေအပြန်အလှန်သက်ရောက်မှုများအများဆုံးဖြစ်နိုင်ခြေကိုခန့်မှန်း။ Psychometrika, 65, 457-474 ။ https://doi.org/https://doi.org/10.1007/BF02296338
Kline, RB (2016) ။ အခြေခံမူများနှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာညီမျှခြင်းမော်ဒယ်လ်များ၏အလေ့အကျင့် (4th ed ။ ) ။ နယူးယောက်, NY: Guilford နှိပ်ပါ။
Kor, အေ, Zilcha-Mano, အက်စ်, Fogel, YA, Mikulincer, အမ်, ရိဒ်, RC, & Potenza, MN (2014) ။ ပြProbleနာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုစကေး၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု။ စွဲလမ်းစေအပြုအမူ, 39, 861-868 ။ https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2014.01.027
Laier, C တို့, Pekal, ဂျေ, & အမှတ်တံဆိပ်, အမ် (2015) ။ လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုနှင့်အလုပ်မဖြစ်သောပြingနာသည်လိင်တူဆက်ဆံခြင်းတွင်ယောက်ျားများတွင်ဆိုက်ဘာဆက်စွဲမှုကိုဆုံးဖြတ်သည်။ Cyberpsychology, အပြုအမူ, နှင့်လူမှုကွန်ယက်အဖွဲ့, 18, 575-580 ။ https://doi.org/10.1089/cyber.2015.0152
Levant, RF, & Richmond, K. (2016) ။ ကျားမအခန်းကဏ္ str တင်းမာမှုများနှင့်ပုလ်အတွေးအခေါ်များ။ YJ Wong, SR Wester, YJ Wong, နှင့် SR Wester (Eds ။ ) တွင်, ယောက်ျားနှင့်ပုလ်၏ယားလက်စွဲစာအုပ်။ (စစ။ 23-49) ။ ဝါရှင်တန်ဒီစီ, အမေရိကန်: အမေရိကန်စိတ်ဓာတ်အသင်းမှ။
Levant, RF, Wong, YJ, Karakis, EN, & Welsh, MM (2015) ။ ကန့်သတ်စိတ်ခံစားမှုနှင့် alexithymia ၏ထောက်ခံချက်အကြားဆက်ဆံရေးကိုအလယ်အလတ်အလယ်အလတ်။ အမျိုးသားများနှင့် Masculinity ၏စိတ်ပညာ, 16, 459-467 ။ https://doi.org/10.1037/a0039739
Lewczuk, K. , Szmyd, ဂျေ, Skorko, အမ်, & Gola, အမ် (2017) ။ အမျိုးသမီးများအကြားပြpornနာအပြာစာပေရုပ်ပုံများကြည့်ရှုရန်ရှာဖွေခြင်း။ အပြုအမူစွဲ၏ဂျာနယ်, 6, 445-456 ။ https://doi.org/10.1556/2006.6.2017.063
Mahalik, JR (2000) ။ ပုလ်လိင်ကွဲပြားမှုအခန်းကဏ္ဍညီညွတ်မှု၏တစ်ဦးကမော်ဒယ်။ စာတမ်းဖတ်ပွဲ-ပုလ်ကျားမအခန်းကဏ္ဍညီညွတ်မှု: ဆန်းစစ်သီအိုရီ, သုတေသနနှင့်အလေ့အကျင့်။ တွင် အမေရိကန်စိတ်ဓာတ်အစည်းအရုံး၏ 108th နှစ်ပတ်လည်ကွန်ဗင်းရှင်းမှာတင်ဆက်စက္ကူ။ ဝါရှင်တန်ဒီစီ။
Mahalik, JR, Locke, BD, Ludlow, LH, Diemer, MA, Scott, RPJ, Gottfried, M. , & Freitas, G. အ (2003) ။ ပုလ်စံစံနှုန်း Inventory မှလိုက်နာမှု၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု။ အမျိုးသားများနှင့် Masculinity ၏စိတ်ပညာ, 4, 3–25. https://doi.org/10.1037/1524-9220.4.1.3
Manning, JC (2006) ။ လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်းနှင့်မိသားစုအပေါ်အင်တာနက်ညစ်ညမ်း၏သက်ရောက်မှု: အသုတေသနတစ်ဦးကသုံးသပ်မှု။ လိင်စွဲခြင်းနှင့်ထိုးဖောက်ခြင်း, 13, 131-165 ။ https://doi.org/https://doi.org/10.1080/10720160600870711
McDermott, RC, Levant, RF, Hammer, JH, Borgogna, NC, & Mckelvey, DK (2018) ။ bifactor မော်ဒယ်ကိုအသုံးပြု။ ငါးပစ္စည်းအထီးအခန်းကဏ္ norm စံချိန်စံညွှန်းများစာရင်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အတည်ပြု။ အမျိုးသားများနှင့် Masculinity ၏စိတ်ပညာ။ https://doi.org/DOI: 10.1037 / men0000178
McDermott, RC, & Lopez, FG (2013) ။ ကောလိပ်ယောက်ျား၏ရင်းနှီးသောမိတ်ဖက်အကြမ်းဖက်မှုသဘောထားများ - အရွယ်ရောက်ပြီးသူများ၏တွယ်တာမှုနှင့်ကျား၊ တိုင်ပင်စိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်, 60, 127-136 ။ https://doi.org/10.1037/a0030353
McDermott, RC, စမစ်, PN, Borgogna, မြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနား, Booth, N. , Granato, အက်စ်, & Sevig, TD (2017) ။ ကောလိပ်ကျောင်းသားများသည်ပုလ်အခန်းကဏ္ norm စံများနှင့်မိမိကိုယ်ကိုသတ်သေရန်အတွေးများအတွက်အကူအညီရှာဖွေသည့်ရည်ရွယ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိသည်။ ယောက်ျားနှင့်ပုလ်၏စိတ်ပညာ။ https://doi.org/10.1037/men0000107
Mellinger, C တို့, & Levant, RF (2014) ။ ယောက်ျား၌လိင်မှုဆိုင်ရာမလိုမုန်းထားမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုများအကြားဆက်နွယ်မှုကိုခြယ်လှယ်သူများ - ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှု၊ ကျားမရေးရာကိုယ့်ကိုယ်ကိုလေးစားမှု၊ လိင်တူဆက်ဆံမှုနှင့်ဘာသာရေးအခြေခံဝါဒ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း, 43, 519–530. https://doi.org/10.1007/s10508-013-0220-z
Mikorski, R. , & Szymanski, DM (2017) ။ အုပ်စုတူအဆင့်တူများ၊ အပြာစာပေရုပ်ပုံများ၊ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်နှင့်အမျိုးသမီးများ၏အမျိုးသားများလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရလိင်အရိပ်လက္ခဏာများကိုဖော်ပြသည်။ အမျိုးသားများနှင့် Masculinity ၏စိတ်ပညာ, 18, 257-267 ။ https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1037/men0000058
Muthén, BO, & Muthén, LK (2016) ။ Mplus အသုံးပြုသူရဲ့လမ်းညွှန် (7th ed ။ ) ။ Los Angeles မြို့, CA: Muthén & Muthén။
Neff, KD (2003) ။ Self-သနားခြင်းကရုဏာစိတ်ကိုတိုင်းတာရန်စကေး၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် validation ကို။ ကိုယ်ပိုင်နှင့်အထောက်အထား, 2, 223-250 ။ https://doi.org/10.1080/15298860309027
နယ်လ်ဆင်, LJ, Padilla-Walker က, LM, & ကာရိုး, JS (2010) ။ “ ဒါဟာမှားတယ်လို့ငါထင်တယ်၊ ဒါပေမဲ့ငါလုပ်နေတုန်းပဲ” - ဘာသာရေးလူငယ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အပြာစာပေများကိုမသုံးပါ။ ဘာသာတရားနှင့်ဝိညာဉ်ရေး၏စိတ်ပညာ, 2, 136-147 ။ https://doi.org/10.1037/a0019127
O'Neil, JM (2015) ။ ယောက်ျားရဲ့အကျား, မအခန်းကဏ္ဍပဋိပက္ခ: စိတ်ဓာတ်ကုန်ကျစရိတ်, အကျိုးဆက်များနှင့်ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုအစီအစဉ်။ ဝါရှင်တန်ဒီစီ, အမေရိကန်: အမေရိကန်စိတ်ဓာတ်အသင်းမှ။
မိဘ, MC, & Moradi, ခ (2009) ။ ပုလ်စံချိန်စံညွှန်းများစာရင်းနှင့်ကိုက်ညီမှုအတည်ပြုချက်အချက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့် Masculine စံချိန်စံညွှန်း - 46 မှလိုက်နာမှု၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု။ ယောက်ျားနှင့်ပုလ်၏စိတ်ပညာ, 10, 175-189 ။ https://doi.org/10.1037/a0015481
မိဘ, MC, & Moradi, ခ (2011) ။ ပုလ်စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ညီညွတ်မှုအကဲဖြတ်ဘို့အတိုကောက် tool ကို: Masculine Norms Inventory-46 မှလိုက်နာမှု၏ Psychometric ဂုဏ်သတ္တိများ။ အမျိုးသားများနှင့် Masculinity ၏စိတ်ပညာ, 12, 339-353 ။ https://doi.org/10.1037/a0021904
မိဘ, MC, Moradi, ခ, Rummell, CM, & Tokar, DM (2011) ။ ပုလ်စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ညီညွတ်မှုများအတွက်ဆောက်လုပ်ကွဲပြားခြားနားမှု၏သာဓက။ ယောက်ျားနှင့်ပုလ်၏စိတ်ပညာ, 12, 354-367 ။ https://doi.org/10.1037/a0023837
မိဘ၊ MC၊ Torrey၊ စီ၊ မိုက်ကယ်၊ MS (၂၀၁၂) ။ “ အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီစစ်ဆေးခြင်းသည်လိင်တူချစ်သူဖြစ်ခြင်း” - ယောက်ျားနှင့်လိင်ဆက်ဆံသောအမျိုးသားများအကြားအိပ်ခ်ျအိုင်ဗွီစစ်ဆေးခြင်းတွင်ပုဂိုလ်လိင်အခန်းကဏ္ conformity နှင့်ညီညွတ်မှု၏အခန်းကဏ္။ ။ တိုင်ပင်စိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်, 59, 465-470 ။ https://doi.org/10.1037/a0028067
ပေါလုက, ခ (2017) ။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့် arousal ခန့်မှန်း: တစ်ဦးချင်းခြားနားချက် variable တွေကို၏အခန်းကဏ္ဍကို။ လိင်သုတေသနများ၏ဂျာနယ်, 46, 344-357 ။ https://doi.org/10.1080/00224490902754152
ပယ်ရီ, SL (2017a) ။ ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှအိမ်ထောင်ရေးအရည်အသွေးကိုလျှော့ချပါသလား? longitudinal ဒေတာကနေသက်သေအထောက်အထား။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း, 46, 549–559. https://doi.org/10.1007/s10508-016-0770-y
ပယ်ရီ, SL (2017b) ။ ညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်စိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာတွေ: ကိုယ်ကျင့်တရား incongruence ၏အခန်းကဏ္ဍကိုဆန်းစစ်။ လူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့်စိတ်ကျန်းမာရေး။ https://doi.org/https://doi.org/10.1177/2156869317728373
ပယ်ရီ, SL (2018) ။ ညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်အိမ်ထောင်ရေးခွဲခြာ: Two-လှိုင်း panel ကိုဒေတာထံမှအထောက်အထား။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း, 47, 1–12. https://doi.org/10.1007/s10508-017-1080-8
စျေး, ဂျေ, ပက်တာ, R. , Regnerus, အမ်, & Walley, ဂျေ (2016) ။ XXX ကဘယ်လောက်များများသုံးစွဲမလဲ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ပတ်သက်သောသဘောထားများနှင့်အပြုအမူများကို ၁၉၇၃ ခုနှစ်မှစ၍ ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ လိင်သုတေသနဂျာနယ်, 53, 12-20 ။ https://doi.org/10.1080/00224499.2014.1003773
Schwartz, JP, Waldo, M. , & Higgins, AJ (2004) ။ ပူးတွဲပါပုံစံများ: ကောလိပ်ယောက်ျားများတွင်ပုလ်ကျားမအခန်းကဏ္ conflict ပconflictိပက္ခနှင့်ဆက်နွယ်မှု။ အမျိုးသားများနှင့် Masculinity ၏စိတ်ပညာ, 5, 143–146. https://doi.org/10.1037/1524-9220.5.2.143
Seabrook, RC, ရပ်ကွက်, LM, & Giaccardi, အက်စ် (2018) ။ လူ့ထက်မက? မီဒီယာအသုံးပြုခြင်း၊ အမျိုးသမီးများအားခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းနှင့်လိင်ကျူးကျော်မှုကိုအမျိုးသားများလက်ခံခြင်း။ အကြမ်းဖက်မှုစိတ်ပညာ။ https://doi.org/10.1037/vio0000198
ရှိမုန်, ဒဗလျူ, & Gagnon, JH (1986) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ script များ: အမြဲတမ်းနှင့်ပြောင်းလဲမှု။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း, 15, 97-120 ။ https://doi.org/10.1007/BF01542219
Smiler, AP (2006) ။ ပုလ်စံချိန်စံညွှန်းဘက်ကလိုက်လျောညီထွေ: အရွယ်ရောက်ပြီးသူအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးအကြားသက်တမ်းအဘို့သက်သေသာဓက။ လိင်အခန်းကဏ္ဍ, 54, 767–775. https://doi.org/10.1007/s11199-006-9045-8
Sniewski, အယ်လ်, Farvid, P. , & Carter က, P. (2018) ။ Self- ရိပ်မိပြproblemနာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုနှင့်အတူအရွယ်ရောက်ပြီးသူလိင်ကွဲယောက်ျားများ၏အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်ကုသမှု: တစ် ဦး ကပြန်လည်သုံးသပ်။ စွဲလမ်းစေအပြုအမူ, 77, 217-224 ။ https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2017.10.010
နေ, C တို့, Bridges, အေ, ဂျွန်ဆင်, JA, & Ezzell, MB (2016) ။ အပြာစာပေနှင့်အထီးလိင်ဇာတ်ညွှန်း - စားသုံးမှုနှင့်လိင်ဆက်ဆံမှုဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း, 45, 983–994. https://doi.org/10.1007/s10508-014-0391-2
Sun က, C တို့, Bridges, အေ, Wosnitzer, R. , Scharrer, အီး, & Liberman, R. (2008) ။ လူကြိုက်များသောအပြာစာပေရုပ်ပုံများရိုက်ကူးသည့်ဒါရိုက်တာယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်း - အမျိုးသမီးများ ဦး ဆောင်သောအခါဘာဖြစ်မည်နည်း။ အမျိုးသမီးများလပတ်၏စိတ်ပညာ, 32, 312–325. https://doi.org/10.1111/j.1471-6402.2008.00439.x
နေ, C တို့, Miezan, အီး, Lee က, NY, & ရှိန်း, JW (2015) ။ ကိုရီးယားအမျိုးသားညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်း၊ အစွန်းရောက်အပြာစာပေရုပ်ပုံများကိုစိတ်ဝင်စားခြင်း၊ လိင်ကျန်းမာရေးအင်တာနေရှင်နယ်ဂျာနယ်, 27, 16-35 ။ https://doi.org/10.1080/19317611.2014.927048
Szymanski, DM, & Stewart က - ရစ်ချတ်ဆန်, DN (2014) ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ဆက်နွယ်မှုနှင့်လိင်ဆိုင်ရာလိင်မှုဆိုင်ရာဆက်စပ်မှုများသည်ငယ်ရွယ်သောအရွယ်ရောက်ပြီးလိင်ကွဲလိင်ခြားသူများကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာများ၌အသုံးပြုသည်။ အမျိုးသားများအတွက်ရဲ့လေ့လာရေးအဆိုပါဂျာနယ်, 22, 64-82 ။ https://doi.org/10.3149/jms.2201.64
Tafarodi, RW, & Swann Jr, WB (1995) ။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမိမိကိုယ်ကိုလေးစားမှု၏ရှုထောင့်များအဖြစ်မိမိကိုယ်ကိုကြိုက်နှစ်သက်ခြင်းနှင့်မိမိကိုယ်ကိုအရည်အချင်းပြည့်ဝခြင်း - အတိုင်းအတာတစ်ခု၏ကန ဦး validation ဖြစ်သည်။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအကဲဖြတ်၏ဂျာနယ်, 65, 322–342. https://doi.org/https://doi.org/10.1207/s15327752jpa6502_8
Tajfel, H. , & Turner, JC (1986) ။ intergroup အပြုအမူ၏လူမှုရေးဝိသေသလက္ခဏာသီအိုရီ။ အက်စ် Worchel & WG Austin (Eds ။ ) ၌, intergroup ဆက်ဆံရေးစိတ်ပညာ (2nd ed ။ , စစ။ 7-24) ။ ချီကာဂို, IL: နယ်လ်ဆင်-ခန်းမ။
Twohig, အမတ် & Crosby, JM (2010) ။ ပြpornနာရှိသောအင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေကြည့်ရှုခြင်းအတွက်ကုသမှုတစ်ခုအဖြစ်လက်ခံခြင်းနှင့်ကတိက ၀ တ်ပြုခြင်းကုထုံး။ အပြုအမူကုထုံး, 41, 285-295 ။ https://doi.org/10.1016/j.beth.2009.06.002
Twohig, အမတ်, Crosby, JM, & ကော့, JM (2009) ။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကိုကြည့်ခြင်း - မည်သူသည်ပြForနာဖြစ်သနည်း၊ မည်သို့နှင့်အဘယ်ကြောင့်နည်း။ လိင်စွဲခြင်းနှင့်ထိုးဖောက်ခြင်း, 16, 253-266 ။ https://doi.org/10.1080/10720160903300788
Vandello, JA, & Bosson, JK (၂၀၁၃) ။ ခက်ခဲစွာအနိုင်ရပြီးအလွယ်တကူပျောက်ဆုံးသွားနိုင်သည်။ အမျိုးသားများနှင့် Masculinity ၏စိတ်ပညာ, 14, 101-113 ။ https://doi.org/10.1037/a0029826
Vegas, V. , & Malamuth, NN (2007) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်မှုများကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်း - ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏အခန်းကဏ္ general နှင့်ယေဘူယျအားဖြင့်တိကျသောအန္တရာယ်အချက်များ။ ရန်လိုမူအကျင့်, 33, 104-117 ။ https://doi.org/https://doi.org/10.1002/ab.20172
Wéry, အေ, & Billieux, ဂျေ (2017) ။ ပြmနာဆိုက်ဘာဆက်စ် - စိတ်ကူး၊ ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်ကုသမှု။ စွဲလမ်းစေအပြုအမူ, 64, 238-246 ။ https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2015.11.007
Wilt, JA, Cooper, EB, Grubbs, JB, Exline, JJ, & Pargament, KI (2016) ။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲလမ်းမှုနှင့်ဘာသာရေး၊ လိင်စွဲခြင်းနှင့်ထိုးဖောက်ခြင်း, 23, 260-278 ။ https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1080/10720162.2016.1140604 အသင်း
Wong, YJ, ဟို, MR, ဝမ်, အက်စ်, & Miller က, ISK (2017) ။ ပုလ်စံချိန်စံညွှန်းများလိုက်နာမှုနှင့်စိတ်ကျန်းမာရေးနှင့်ဆက်စပ်သောရလဒ်များအကြားဆက်ဆံရေး Meta- ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း တိုင်ပင်စိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်, 64, 80-93 ။ https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1037/cou0000176
Wong, YJ, Owen, ဂျေ, & Shea, အမ် (2012) ။ အမျိုးသားများအနေနှင့်ပုဂ္ဂုလ်များလိုက်နာမှုနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြressနာများကိုလျှို့ဝှက်လူတန်းစားဆုတ်ယုတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု။ တိုင်ပင်စိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်, 59, 176-183 ။ https://doi.org/10.1037/a0026206
Wong, YJ, Pituch, KA, & Rochlen, AB (2006) ။ အမျိုးသားများ၏တင်းကျပ်သောစိတ်ခံစားမှု - အခြားစိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်ဆိုင်သောတည်ဆောက်မှုများ၊ အမျိုးသားများနှင့် Masculinity ၏စိတ်ပညာ, 7, 113–126. https://doi.org/10.1037/1524-9220.7.2.113
Wong, YJ, & Wester, SR (2016) ။ ယောက်ျားနှင့်ပုလ်၏ယားလက်စွဲစာအုပ်။ ဝါရှင်တန်ဒီစီ: အမေရိကန်စိတ်ဓာတ်အသင်းမှ။ https://doi.org/doi:10.1037/14594-011
Wright, PJ (2011) ။ လူငယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ်အစုလိုက်အပြုံလိုက်မီဒီယာသက်ရောက်မှု: ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်များအတွက်အရေးဆိုမှုများကိုသုံးသပ်ခြင်း။ နိုင်ငံတကာဆက်သွယ်ရေးအသင်းရာဇဝင်, 35, 343-385 ။ https://doi.org/https://doi.org/10.1080/23808985.2011.11679121
Wright, PJ, & Bae, အက်စ် (2016) ။ အပြာစာပေနှင့်အထီးလိင်ဆိုင်ရာလူမှုဆက်ဆံရေး။ YJ Wong & SR Wester (Eds ။ ) တွင် ယောက်ျားနှင့်ပုလ်၏စိတ်ပညာ၏လက်စွဲစာအုပ် (စစ။ 551-568) ။ ဝါရှင်တန်ဒီစီ: အမေရိကန်စိတ်ဓာတ်အသင်းမှ။ https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1037/14594-025
Wright, PJ, & Tokunaga, RS (2016) ။ အမျိုးသားများကမီဒီယာသုံးစွဲမှုကိုကန့်ကွက်သည်၊ အမျိုးသမီးများအားခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းနှင့်အမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုကိုထောက်ခံသည့်သဘောထားများ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း, 45, 955–964. https://doi.org/10.1007/s10508-015-0644-8
Wright, PJ, Tokunaga, RS, & Kraus, အေ (2016) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်းနှင့်အမှန်တကယ်လိင်အကြမ်းဖက်မှုများကိုလူ ဦး ရေလေ့လာမှုများမှ meta-analysis သည်။ ဆက်သွယ်ရေးဂျာနယ်, 66, 183-205 ။ https://doi.org/10.1111/jcom.12201
Wright, PJ, Tokunaga, RS, Kraus, အေ, & Klann, အီး (2017) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ရှုသုံးစွဲမှုနှင့်ကျေနပ်မှု။ Meta-analysis ။ လူ့ဆက်သွယ်ရေးသုတေသန, 43, 315-343 ။ https://doi.org/10.1111/hcre.12108
ယန်, X တို့မှာ, Lau, JTF, ဝမ်, Z. , Ma, Y.-L. , & Lau, MCM (2018) ။ ကွဲပြားခြားနားသောစိတ်ဖိစီးမှုနှင့်ပုလ်အခန်းကဏ္ disc ကွာဟမှုနှင့်စိတ်ကျန်းမာရေးပြproblemsနာများအကြားမိမိကိုယ်ကိုလေးစားမှု၏ဖျန်ဖြေခြင်းအခန်းကဏ္။ ။ အကျိုးသက်ရောက်စေ Disorders ၏ဂျာနယ်, 235, 513-520 ။ https://doi.org/10.1016/j.jad.2018.04.085
Ybarra, ML, Mitchell က, KJ, Hamburger, အမ်, Diener-West, အမ်, & Leaf, PJ (2011) ။ X-rated ပစ္စည်းများနှင့်ကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရန်လိုသည့်အပြုအမူများကျူးလွန်ခြင်း။ ချိတ်ဆက်မှုရှိသလား။ ရန်လိုမူအကျင့်, 37, 1-18 ။ https://doi.org/10.1002/ab.20367
လူငယ်တို့, KS (2007) ။ ကုသမှုရလဒ်များနှင့်သက်ရောက်မှုတွေ: အင်တာနက်စွဲနှင့်အတူသိမှုအပြုအမူကုထုံး။ Cyberpsychology & အပြုအမူ, 10, 671-679 ။ https://doi.org/10.1089/cpb.2007.9971
Zitzman, ST, & ဘတ္, MH (2009) ။ ဇနီး၏ခင်ပွန်းသည်များ၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်းနှင့်အတူတကွလှည့်စားခြင်းသည်အရွယ်ရောက်ပြီးသူလင်မယားဆက်ဆံရေးအတွက်တွယ်တာမှုခြိမ်းခြောက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ လိင်စွဲခြင်းနှင့်ထိုးဖောက်ခြင်း, 16, 210-240 ။ https://doi.org/10.1080/10720160903202679